စိတ်အားဖြည့် စကားစုလေးများ by Aung Naing - issuu
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၁) စကားလုံး… စကားလုံးတွေနောက်ကို လုကြိ် ပီး မခံစားပါနဲ။့ စကားလုးံ ဆုတိာ ပညတ်တွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ချစ်ရင် အကောင်းပြောကြမှာ ဖြစ်ပြီး၊ မုန်း ရင်တော့ အဆိုးပြောကြမှာပါ။ တကယ်မြဲချင်ရင်… ရားထူဌာနန္တရတွေ မြဲဖအို့ တွက် ဗေဒင်၊ ဓာတ်ရကို ဓ်ာတ်ဆင်တွေ မလုပိါဘူး။ ကိယုက်ယို တ်ငို ပ်ဲ လိုပါတယ်။ ကုယိ့်ရဲ အကျင်သ့လီမြဲဖပိုဲ့လုပိါတယ်။ ကုယိက်ျင့်မြဲမှ ကိယုလ်ည်းမြဲမှာ ပါ။ ကြည်ညိုတတ်ပါစေ… ဘယ်ပဂ္ဂုိ လ်က ဘယ်လြို ကည်ညို စရာကောင်းတယ် ဆုတိာထက် ကုယိက့် ယို က်ို ကြည်ညိုစရာ ကောင်းနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကုယိက့် ယို က်ို ကြည်ညို နုငိမ်ှ သူများရဲ့ ကြည်ညိုမှုကို ခံနငို ပ်ါမယ်။ အဲလမှိုမဟုတရ်င် သူများရဲ့ ကြည်ညို ခံမဟှုာ ခဏပဲဖြစ်မှာ ပါ။ ကုယြိ် ဖစ်ကယိုခံ… ကုယိလ်ပုသ်မျှ သူများတွေ မသိနငိုပေမယ့် ကုယိက်ယို တ်ိုငက်တော့ သိနေပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် ကုယိက့် ယို က်ို မညာမိဖို့ ကုယိအ့် လုပ်ေတွကို ရုိး သားစွာ လုပဖ်လိုို့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လလို့ ည်းဆုေိတာ့ ကုယိလ်ပုတ်ဲ့ အကောင်းအဆုိး ကို ကုယိပ်ခဲရံမှာ ဖြစ်လိ့ပုါ။ ဒီလေို နကြည်ပ့ါ… အချစ်ရရှိ င် အပြစ်ရတှိ တ်သလို အမုန်း ရှရိင်လည်း အရှုးံ ရှတိတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြစ်ကင်းဖုနိဲ့ အရှုံး မရှဖိအို့ တွက် မချစ်မမုန်း ဘဲ နေနုင်ိအောင် ကြိုးစားကြဖို့ လုပိါတယ်။ အပြစ်မဖြစ်အောင်… အပြစ်ဆတိုာဟာ ကုယိက့် အို ကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်တတ်ကြသလို သူများကို အကြောင်းပြုပြီးလည်း
ဖြစ်တတ်တယ်ဆတိုာသတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ကုယိက့်ို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ အပြစ်တွေကို တောင် မဖြစ်အောင် မလုပန်ငိုေ် သးပဲနဲ့ သူများအပြစ်တွေကြို ကည်ြ့ ပီး ကုယိမ်ှာ အကုသလိုအပြစ်တွေ ထပ်တိးု အောင် မလုပသ်င်ပ့ါဘူး။ အကုသလို မ်ဖြစ်အောင်… တစ်နေ့တစ်နေ့ ကုယိတ်စ်ယောက်တည်းတောင် အကုသလိုေ် တွက မရေတွကန်ငိုေ် အာင် ဖြစ်နေတာ သူများကြုိ ကည်ြ့ ပီး၊ သူများကိုအမြှီ ပုပြီး အကုသလိုတွေထပ်ဖြစ်မယ်၊ အကုသလိုေ် တွ ထပ်တိုး နေမယ် ဆုရိင်တော့ နေရတဲ့ အခုကိဟ်ာ အကုသလိုေ် တွနချဲ့ည်း ဖြစ်နေကြတော့မှာ ပါ။ ကုယ်ိကောင်းအောင်အရင်လပု… ပုထဇုင်တွေဖြစ်နေသမျှ ရမ်းနေကြမှာပါ။ ရမ်းနေသမျှ အပြစ်အနာအဆာတွေလည်း ရှေိနကြမှာပါ။ ဒီတော့ကား ရမ်းနေကြတဲသ့ချူင်း အတူတူ ဘာဖြစ်လို့ သူများရမ်းတာ၊ သူများအပြစ်အနာ အဆာဖြစ်တာ၊
သူများရဲ့ မလျော်တာ၊ သူများရဲ့ ကောင်း၊ မကောင်းတာတွေကို လုကြိ် ကည်နေ့ကြမှာလဲ…။ ဘုရားရှင် မိနြ့် ကားတော်မသူလို ကိယု့်ရဲ့ ကောင်းမကောင်းတာတွေကသိုာမြင်အောင်ကြည်၊့ ကိယုေ်ကာင်းမှု မကောင်းမှု ပြုမပြုကုသိာကြည်ြ့ ပီး ကုယိေ်ကာင်းအောင် အရင်လပုသ်င်ြ့ ကတာပေါ့။ အမှနြ် ကည့တ်တ်ပါစေ… သူမှားတယ် ကုယိမ်ှနတ်ယ်ဆတိုဲ့ စိတအ်တွေးဟာ ပြဿနာကို ပြေလည်စေတဲ့ သဘောမရှဘိဲ သံသရာ ကုသိာ ရှည်ေနစေတဲ့ သဘောရှပိါတယ်။ ပုထဇုင် လူသားများဖြစ်၍ အလုးံ စြုံ ပည့်စတုဲံ့ သူဆတိုာမရှနိငိုသလို အမှားမလုပမ်တိသဲူ့၊ မမှားဖူးတဲသ့ဆူတိုာလည်း မရှနိုငပ်ါဘူး။ ဒီလအို မှားတွေ ရှတိတ်တသဲူ့
အချင်းချင်း သူမှားတယ်၊ ကုယိမ်နှတ်ယ်ဆြို ပီး ငြင်းခြုံ က၊ ခုက်ိရန်ဖြစ်ကြ၊ အငြိုးအတေးထားကြမယ်ဆိရုင် ဒီသသံရာကြီးဟာ ဒီဘ၀မှာရော နောင်ဘ၀ဘ၀များအထိပါ ပါသွားကြတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် အကြောင်း ရှလို့ အကျိုးအနေနဲ့ ခေတ္တလာတွေ့ကြတဲ့ အခုကိမ်ှာ အမှားတွေကို မကြည်ဘဲ့ အမှန်ေလးတွေကသိုာကြည်တ့တ်တဲ့ အကျင်လေ့းတွေ လုပ်ေပးသင်ြ့ ကပါတယ်။ အပေါင်းအသင်း… အပေါင်းအသင်းဆုတိာ အများကြီးရှဖို့ မလုပိါဘူး။ မကောင်းတဲအ့ပေါင်းအသင်း အများကြီး ရှတိာထက်
ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်း တစ်ယောက်နစှေ်ယာက်လောက် ရှတိာက ပြုိ ပီး ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ကောင်းကျိုး တွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်း အများကြီး ရှေိနတာထက် ကောင်းတဲ့ အပေါင်း အသင်း အနည်းငယ်ရှိေနတာက ဒီဘ၀ရော နောင်သသံရာပါ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတာပါ။
မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ အဖော်မနြွ် ဖစ်စေတတ်တဲ့ အပေါင်းအသင်း အများကြီး ရှတိာထက် ကောင်းတဲ့ အရာတွေမှာ ညွှနြ် ကားပြသပေးတဲ့ အပေါင်းအသင်း နည်းနည်းလေးရှတိာက ပြုိ ပီးတန်ဘိးု ရှလိပှါတယ်။
သောက်မစှားမှ ကျွေးနုင်ိမွေးနုငိ် ပေးနိုငက်မ်းနုငိမ်ှ အဖော်ဖြစ်တဲ့ အပေါင်းအသင်းများ ပေါများနေတာထက် ဒုက္ခေ ရာက်ချိနမ်ှာ နှုတ၏်စောင်မခြင်း ကုယိ်၏စောင်မခြင်း ပြုတတ်တဲ့ အပေါင်းအသင်း အနည်းငယ်က
ပြုိ ပီးအားကုိး ရပါတယ်။ သောက်မစှားမှ မဟုတတ်ာလုပမ်ှ အပေါင်းအသင်းတွေ ပေါများတာထက် အပေါင်း အသင်းမပေါပေမယ့် အကုသလို မ်ဖြစ်ဘ်ဲ ရှိနေတာက ပြုိ ပီး အကျိုးများပါတယ်။
အရှင၀်ိစတ္တိ (မနာပဒါယီ)
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၂) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိနေပါစေ… တစ်စတုံ စ်ခကြုို ဖစ်စေ တစ်စတုံ စ်ယောက်ကြို ဖစ်စေ အကြောင်းပြုပြီး ကုယိသ့် န္တာန်မှာ မကောင်းတဲစ့တိ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲအ့ခါ အဲဒစီတ်ိဖြစ်တာကို ချက်ချင်းသိနငိုအောင် သတိပြုသင်ပ့ါတယ်။ အဲဒစီတ်ိဖြစ်ခကို တ်ငွ် “ငါ့မှာ ဒီစတြိ် ဖစ်နေပါလား“လို့ သိလကို တ်ာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အဲဒစီတိဟ်ာရှေ့ဆက် မဖြစ်တော့ဘဲ ရပ်တန့် သွားပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ဘာစိတြ် ဖစ်ဖြစ် ဖြစ်ခကို က်ို သိအောင်ကြိုးစားပါလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
မစွဲလန်းမိပါစေနဲ…့  စဲလွန်းမိရင် အမှနက်ို မမြင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ မမြဲတသဲ့ ဘောကို မြဲတယ်လို့ ထင်လာတတ်ပြီး မရှကို
အရှလို့ ထင်လာတတ်ပါတယ်။ မပုငိတ်ာကို ပိုငတ်ယ်လို့ ထင်လာတတ်ပြီး ငါမဟုတသ်ည်ကို ငါဟု
ထင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင်လ့ည်း ငါ၊ ငါ့ဥစ္စာ၊ ငါ့ရာထူး၊ ငါ့ဂုဏ၀်ါစတဲ့ ငါစဲမျွားဖြင့် အချိနက်နုက်ာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာနစသည် ပြိုင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အကောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆုိး ပဲဖြစ်ဖြစ် စဲလွန်းမိရင် မကောင်းဖြစ်တတ်ပြီး ဒုက္ခေ ရာက်တတ်တယ်ဆတိဲု့ အချက်ကို သတိပြုရပါမယ်။
သတိ… မှားတတ်သည်… လောကမှာ အမှားဆုတိာ ဘယ်သမှူ မကင်းကြပါဘူး။ ပုထဇုင်ပဂ္ဂုိ လ်များဖြစ်၍လည်း ပုလိေို့ တာင် အမှား ရှတိတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိအုမှားတွေကသိုာလုကြိ် ပီးတစ်ခချုင်း အပြစ်ပချုံနေကြမယ်ဆရို င် အမှားဟာ အမှန် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘဲ အငြိုးအတေးတွေပမျဲားလာကာ အဆုးံ မသတ်နငိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
မာနတွေပြိုင်ကာ အနုငြိ် ပုလာတတ်ပါတယ်။ အမှားတစ်ခကုို အကြောင်းပြုပြီး မကောင်းမှုတွေ လုပြ် ဖစ်လာ တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို မကောင်းမှုတွေအထိ လုပလ်ာတတ်ပြီဆရို င်တော့ ဒီဘ၀မှာတင်မဟုတဘ်ဲ နောင် သံသရာအထိ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ကနုပ်ါတယ်။ နောင်ဘ၀အထိ ပါလာပြီဆရို င်တော့ သံသရာက
ရှညလ်ာလေပြီပေါ့။ ဒီဘ၀မှာတောင် ဒီလဒို ကု္ခေ တွနဲ့ ကျင်လည်နေကြရတာ နောင်သသံရာအထိ ပါသွားပြီ ဆုရိင်တော့ ဘ၀အဆက်ဆက် ဒုက္ခေ တွက ပြောမပြနုင်ိအောင်ပါပဲ။ ရှညလ်ကို မ်ယ့် သံသရာကလည်း ခံပေတော့လပိုဲ့ဆုရိတော့မလို မဆုးံ နုင်ိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အမှားမကင်းတဲ့ ပုထဇုင်လသူားတွေ
ဖြစ်နေကြတဲအ့တွက် ဒီအမှားကို အကြောင်းပြုပြီး သံသရာ မရှညြ် ကဖို့၊ သူမှားတယ်၊ ကုယိမ်ှနတ်ယ်ဆြို ပီး မာနတွေ မပြိုင်မြိ ကဖု၊ိ့ အတတ်နိငုဆ်ုးံ ခွငလ့် တြွှ် ပီး သီးခံခ၀ါချနိုငဖ်ို့ သတိပြုသင်ြ့ ကပါတယ်။
အနေချောင် အသေကြပ်၊ အနေကြပ် အသေချောင်… တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ နေဖုခိ့ က်သလောက် သေဖုလိ့ ည်း ခက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေဖို့
ကြိုးစားကြသလို သေဖုလိ့ ည်းကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ အနေချောင်ဖို့ ကြိုးစားကြသလို အသေချောင်ဖလို့ ည်း ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အနေချောင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း အသေမချောင်ဘဲ
ဖြစ်နေကြတာတွေပဲ များနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး အမိနရ့် ဖှိူး တာ အမှတရ်မိ ပါတယ်။ ``အနေချောင်ရင် အသေကြပ်မယ်၊ အနေကြပ်မှ အသေချောင်မယ်``တဲ။့
အပြစ်မတင်မိကြပါစေနဲ…့  တကယ်တော့ အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အကျင့ရ်တှိာလူတစ်ယောက်အတွက် ကောင်းတဲလ့က္ခဏာ မဟုတပ်ါ ဘူး။ အပြစ်တင်တတ်တယ်ဆကို တည်းက အပြစ်ကြည်တ့တ်လို့ အပြစ်တင်တတ်တာပါ။
အပြစ်ကြည်တ့တ်ပြီ ဆုရိင်တော့ ကုသလို စ်တိန်ဲ့ ကြည်တ့ာမဟုတဘ်ူး ဆုတိာသေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အကုသလို ပ်ေဲပါ့။ ဟုတပ်ါတယ်။ အပြစ်ဆတိုာလူတစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် မကောင်းတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်ကို ကြည့တ်တ်တသဲ့ ဆူရို င်လည်း မကောင်းတဲအ့ချက်ကို မြင်တတ်တအဲ့ တွက် မကောင်းတဲစ့တ်ိပဲ အရင်ဖြစ်မှာပါ။ မကောင်းတဲစ့တြိ် ဖစ်ရင် အကုသလို စ်တြိ် ဖစ်ပြီး အယောနိသော
မနသိကာရ ဆုတိဲ့ မကောင်းတဲ့ နှလုးံ သွင်း စိတထ်ား ဖြစ်ပါတယ်။ အယောနိသောမနသိကာရ ဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ ကုသလိုဖြစ်ဖလို့ ည်း ခက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာပဲကြည်ြ့ ကည့် ဘာပဲ
တွေးတွေး အကုသလို မ်ဖြစ်အောင် ယောနိသောမနသိကာရ စိတ်ေလးနဲ့ အကောင်းဘက်က ကြည့တ်တ် အောင် ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ အဲဒလီို အကောင်းဘက်က ကြည်တ့တ်ကြမယ်ဆိရုင် ဘာကုပြိဲ ဖစ်ဖြစ်
ဘယ်သကူို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြှီ ပုပြီး အကုသလို စ်တြိ် ဖစ်ဖို့ ခက်ခသွဲားတတ်ပါတယ်။
ကုယိက့် ယို က်ိုသာ ပြိုင်လကို ပ်ါ… မပြိုင်နဲ့ ဆုေိပမယ်။့ ကုယိက့် ယို က်ေို တာ့ ပြိုင်နေရပါမယ်။ ယနေ့ငါနဲ့ မနက်ဖြန်ငါဟာ မတူအောင် ပြိုင်နေရ ပါမယ်။ မကောင်းပြိုင်ဖို့ မဟုတ၊် အကောင်းပြိုင်ဖပို့ါ။ ယနေ့ငါဟာ ကံငါးပါးမလုံသေးပေမယ့် မနက်ဖြန်
ငါကတော့ ကံငါးပါးလုေံစရမယ်လို့ ပြိုင်ရပါမယ်။ ယနေ့ငါဟာ ကုယိက်ျင့တ်ရား မကောင်းပေမယ့် မနက်ဖြန် ငါကတော့ ကုယိက်ျင့တ်ရားကောင်းရမယ်လို့ ပြိုင်ရပါမယ်။ ယနေ့ငါဟာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အလုပ်ေတွ ကို ဒီလောက်ပဲ လုပန်ငိုသေးပေမယ့် မနက်ဖြန်ငါကတော့ ဒီထက်ပြို ပီး လုပန်ိုငရ်မယ်လို့ ပြိုင်ရပါမယ်။
ဒီနေ့ငါဟာ စိတထ်ားလေးတွေကို ဒီလောက်ပဲ ပြုပြင်နငိုသေးပေမယ့် မနက်ဖြန်ငါကတော့ ဒီထက်ပြို ပီး ပြုပြင်နငို ရ်မယ်လို့ ပြိုင်ရပါမယ်။
ရတာမလို လိုတာမရ ဤလောက… သတ္တ၀ါတွေဟာ ရနေတာကို မကျေနပ်နငို ၊် မတင်းတိမန်ငိုဖြစ်တတ်ပြီး မရသေးတာကို လုချိင်တတ်တာ
သဘာဝဖြစ်ပေမယ့် ရှသိမျှအတုငိ်း အတာ၊ ရသမျှအတိုင်း အတာ၊ ကံပေးသမျှ အတုငိ်းအတာလေးနဲေ့  တာ့ ရောင်ရဲ့နုငိေ်အာင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိမှု မရောင့်ရဲ့ နုင်ိရင် ရချင်မှု၊ လုချိင်မှု၊ ရသမျှကို အလိုမကျ နုငိမ်၊ှု ရပြီးတော့လည်း ထပ်ရချင်မ၊ှု သူရ့  တှိာကို အားကျမှု စတာတွေကြောင့် ဒီဟာတွေနောက်ကို
လုက်ိရင်း လုက်ိရင်း မဆုးံ နိုင်ေအာင်ပင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကုယိက်ဘယ်လပိုဲ
လုချိင်ရချင်နေပေမယ့် လောကကြီးဟာ သူသ့  ဘောအတုငိ်းသာ ဖြစ်နေတော့ လုချိင်တာကို ရချင်မလှည်း ရနုငိမ်ှာ၊ ရတဲဟ့ာလည်း ကုယိလ်ချိုင်တဟဲ့ာဖြစ်ချင်မြှ ဖစ်မှာဆုတိာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရတာမလို လုတိာမရတဲ့ လောကကြီးမှာ ရချင်မှေုနာက်တွေပဲ လုကိမ်နေကြပဲ ရသမျှ ရှသိမျှအပေါ်မှာသာ ရောင့်ရနဲိုင်ေအာင်၊ ကျေနပ်နိငုေ်အာင် ကြိုးစားသင့်ကြပါတယ်။
ရောင်ရ့နဲငို ပ်ါမှ… “ရှတိာလေးနဲ့ ရောင့ရ်ဲပါ“တဲ။့ ဒီစကားလေးက သိပတ်န်ဘိးု ရှပိါတယ်။ ဗုဒစ္ဓာပေမှာတော့ “တုဋ္ဌီ သုခါ ယာ ဣတရေန= ရသမျှ၊ ရှသိမျှနဲ့ ကျေနပ်နစှသ်ိမန့် ငိုြ် ခင်းဟာ ချမ်းသာ၏“ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သိကြတဲအ့တိုင်း ပဲ ရတာလေးအပေါ်မှာ မရောင့ရ်နဲိုင် မကျေနပ်နငိုြ် ကတော့ တစ်ချို့က ပြုိ ပီးရအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။ ပိုပြီးလုချိင် ပြုိ ပီးရချင်တော့ တရားတာရော မတရားတာရော မသိတော့ဘဲ ရဖုတိ့ စ်ခု တည်း ကြညြ့် ပီး လုပမ်ြိ ကရာက ပစ္စုပ္ပန်မှာရော သံသရာမှာပါ ဒုက္ခြ ဖစ်ကြရပါတယ်။ ရချင်တဲ့ လုချိင်တဲ့
လောဘဆုတိာ အကန်ေ့  လးနဲ့ တားပေးရပါတယ်။ အဲဒါကို တုဋ္ဌီ (ရောင့ရ်တဲင်းတိမန်ငိုြ် ခင်း)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကန့်မထားရင် ရပြီးရင်းရချင်၊ လြုိ ပီးရင်းလုချိင် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ရပြန်တော့လည်း ကျေနပ်နစှသ်မိမ့်ှုမဖြစ်နငို ဘ်ဲ နောက်တစ်ခကို ရဖုအိ့ားထုတလ်ာတတ်ပါတယ်။ ဒီလနိုဲ့ မဆုးံ နုင်ိတော့ဘဲ နောက်ဆုးံ တော့ အလုမိကျမှုတွေနသဲ့ာလည်နေကြပါတော့တယ်။
အနာနဲ့ ဆား… ဆားရဲ့ပင်ကို သဘာဝက ငန်တတ်ပါတယ်။ အငန်ဟာ အနာတစ်ခခုနဲု့ ထိတွေရင် စပ်ခြင်းပူခြင်းကို
ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အနာမရှဘိဲ သာမန်ဆိရုင်တော့ ဘာခံစားမှုကိမှု မဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆားကို အသုးံ ပြုတဲသ့ချူင်း၊ ဆားကို ကုငိတ်သဲူ့ချင်း အတူတူ ဘာအနာမှ မရှတိသဲူ့ကုငိတ်ာနဲ့ အနာရှတိသဲူ့
ကုငိတ်ာမှာ ခံစားချက် ကွာတယ်လို့ ဆုတိာပါ။ သူများတွေ ကုငိတ်ဲ့အခါ ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ကုယိက်ငို မ်ပှဲ
ပူတယ်စပ်တယ် ဆုရိင်တော့ ကုယိမ့်ှာ အနာတစ်ခခု ရှိနေလို့ ဖြစ်တာပါ။ ကုယိမ့်ှာ ဘာအနာမှ မရှရိင် ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှပိါဘူး။
စိတမ်နာမိပါစေနဲ…့  အနာ နှစမ်ျိုးရှပိါတယ်။ ရုပမ်ှာ ဖြစ်တဲ့ အနာရယ်၊ စိတမ်ှာ ဖြစ်တဲ့ အနာရယ်ပါ။ ရုပမ်ှာဖြစ်တအဲ့ နာကတော့ တကယ်တမ်းပြောရရင် အနာလုေိ့ တာင် ပြောလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လလို့ ည်းဆုေိတာ့ ရုပတ်ရားကုကိအနာကြီး ဖြစ်နေတာကိုး။ စိတမ်ှာ ဖြစ်တဲ့ အနာကတော့ အလွန်ေကြာက်စရာကောင်းပါတယ်။
ပြုိ ပီးနာကျင်လေ ပြုိ ပီးဒုက္ခေ ရာက်လေပါပဲ။ ဒီအနာဖြစ်ပြီဆိရုင်တော့ ပျောက်အောင်ကဖုလို့ ည်း မလွယလ်ှ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတအ်နာမဖြစ်အောင် အထူးကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ စိတမ်ှာအနာဖြစ်ပြီဆရို င်တော့
အရင်ဆံုး ခံစားရတာက ကုယိက်ယို တ်ငို ပ်ါ။ ကုယိက့် ယို က်ို အမြှီ ပုပြီး ကုယိစ့် တိမ်ှာ အနာဖြစ်ရင်လည်း ကုယ်ိပဲ အရင်ခရံမှာ ဖြစ်ပြီး သူများကို အမှီပြုပြီး ဖြစ်ရင်လည်း သူများထက်အရင် ကုယိက်ယို တ်ငို ပ်ဲ
နာကျင်ရတာပါ။ သေချာပြန်တွေးကြည့ေ်တာ့ စိတမ်ှာ အနာဖြစ်ပြီဆရို င် ကုယိ့်ကြောင့်ပြဲ ဖစ်ဖြစ် သူေ့  ကြာင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နာကျင်စွာ ခံစားလုကိရ်တာကတော့ ကုယိပ်ဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြွား… ကြွ… ကျ… မြန်မာအများစုဟာ အကြွားသန်ကြပါတယ်။ မရှိ ရှတိာ ရှာကြံ ကြွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့
ကြွားလုသိ့ တိာထက် မကြွားဘဲ သိတာက ပုေိကာင်းပါတယ်။ သေချာတွေးကြည်ရ့င် အကြွားလွနရ်င် ကြွတတ်ပါတယ်။ ကြွလာပြီဆရို င်တော့ ကျဖုအိ့ တွက် ရှေးပြေးနိမတိပ်ါပဲ။ ဒါကြောင့် မကြွားမိကြပါစေနဲ။့ ကြွားမိရာက ကြွလာတတ်ပြီး နောက်ဆုးံ ကျသွားတတ်ပါတယ်။
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၃) ... တရားအားထုတ်တယ်ဆတိုာ… တရားအားထုတတ်ယ်ဆတိုာတကယ်တော့ “တရားတဲ့ အားတွေ ထုတတ်ာပါ”ပဲ။ ကုယိသ့် န္တာန်မှာ ရှတိဲ့ မတရားတဲ့ အားတွေ အပြင်မထွက်ေအာင် မတရားတဲ့ အားတွေ မပေါ်အောင် တရားတဲအ့ားတွေနဲ့ အနိုင် ယူတာကို တရားအားထုတတ်ယ်လို့ ဆုတိာပါ။ မတရားတဲ့ အားဆုတိာ တခြားမဟုတပ်ါဘူး။ လောဘ၊
ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာနစတဲ့ ကိလေသားတရားတွေကို ပြောတာပါ။ ပုထကုေိလသေ ဇနေတီတိ ပုထဇု္ဇေနာကိလေသာတွေ မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ေကြာင့် ပုထဇုဉ်လို့ ဆုတိဲ့အတုငိ်း ပုထဇုဉ်များမှာ ကိလေသာ
တရားများ အမြဲမပြတ် တုိး တက်ဖြစ်ပွား နေတတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပြန်တွေးကြည့လ်ကို ရ်င် မတရား တဲ့ အားတွေဖြစ်တဲ့ ကိလေသာတွေနသဲ့ာအချိနက်ုန်ေနတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အချိနမ်ရွေး
သူများကို ကြညြ့် ပီး၊ သူများပိုငဆ်ငို တ်ာတွေကြညြ့် ပီး လောဘဖြစ်လကို၊ အလုမိကျတာတွေနဲ့ တွေ့တဲအ့ခါ
ဒေါသဖြစ်လကို၊ ကုယိက့် ယို က်ို အထင်ကြီးနေတဲ့ မာနတွေဖြစ်လကို ၊် အမှားကို အမှနထ်င်၊ အမှနက်ို အမှား ထင်တဲ့ မောဟဖြစ်လကိုစသည်စသည်ဖြင့် နေ့စဉ်မပြတ် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး အကုသလိုကိလေသာ တွေ
ဖြစ်နေတဲအ့တွက် တရားတာတွေ ပျောက်ပျောက်နေပြီး မတရားတာတွေပဲ ရောက်ရောက် နေတတ်
ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုထဇုဉ်တွေရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီမတရားတဲ့ ကိလေသာတွေ မဖြစ်အောင်၊ မတရား တဲ့ အားတွေအဖြစ်နည်းအောင် တရားတဲ့အားတွေ ထုတြ် ကတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကုပိတဲရားအားထုတတ်ယ် လို့ ဆြုိ ကခြင်းပါ။
ဉာဏ်ဝရီယိပြည့စ်မှုံကံကကူညမီည်… လူဟာ ဘုန်း ကံကြီးမားပြီး အရာရာကို ဖန်တီး နိုငတ့်ဲ သူဖြစ်ပေမယ့် ကံ ဉာဏ် ၀ီရယိတွေကို အသုးံ ချပြီး ရရှလိာတဲ့ ဘ၀ကို တန်ဘိးု ရှိအောင် အသုံးမပြုနုင်ိရင် လူပသီတဲ့ လူလိ့မုဆုနိုငပ်ါဘူး။ တချို့ လူဘ့  ၀ကို
ရလာပေမယ့် ရရှလိာတဲ့ ဘ၀ကို ဖြစ်သလို နေပစ်လကို တ်တ်ပါတယ်။ အရာရာကို ဖန်တီး နုငိတ်ဲ့ လူဘ့  ၀မှာ
ကုယိလ်ချိုင်တပဲုံ့စံ မဖန်တီး ဘဲ တန်ဘိးု မ့တဲ့ လူအဖြစ် ဖြုန်းတီးပစ်တတ်ပါတယ်။ ကြိုးစားရင် ဖြစ်နငို တ်ဲ့ ဘ၀ ကို မကြိုးစားဘဲ ကံကသိုာအပြစ်ပချုံတတ်ပါတယ်။ ကံ မကောင်းပါဘူးလုဆိ့ ကိုာကုယိရ့့်ဲ ပစ္စုပ္ပန် အစွမ်း
ကို မေ့ထားလုကြိ် ကပါတယ်။ ဉာဏ်နဲ့ ၀ီရယိကုပိယ်ပြီး အတိတက်ံ မကောင်းလို့ ဒီလဘို ၀မျိုး ဖြစ်နေရတာ လို့ ဘာမှမလုပဘ်ဲ မခုငိလ်တုဲံ့ အကြောင်းပြများနဲ့ပဲ အဖော်ပြုနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လူအဖြစ် မွေးဖွားပေးလုကိတ်ာနဲတ့  င် အတိတက်၏ံအကျိုးပေးမှု ပြီးဆုးံ သွားပါပြီ။ ပစ္စုပ္ပန် တုိး တက်ဖို့ အတွက်
ကတော့ ပစ္စုပ္ပနမ်ှာ လုပရ်မယ့် လူရဲ့ တာဝန်ပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ ကံဆတိုာအလုပက်ို ဆုတိာဖြစ်တဲ့ အတွက် အလုပ်ေကာင်းရင် ကံကောင်းမှာဖြစ်ပြီး အလုပဆ်ိးု ရင်တော့ ကံဆိးု မှာပဲပေါ့။ ဒါကြောင့် ကံရဲ့ အကျိုးပေးကောင်းကို လုချိင်ရင် ဉာဏ်ဝရီယိနဲ့ပဲ ကြိုးစားရယူဖို လိုပါတယ်။ ဉာဏ်ဝရီယိရှပိါမှ ကံက
ကူညမီည်လို့ ဆုတိအဲ့ တုငိ်း စေတနာကောင်းပါတဲ့ ဉာဏ်ဝရီယိနဲ့ ကြိုးစားရင် ကံလည်းကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့…လူ…လူး… လူဘ့  ၀ဟာ အရာရာကို ဖန်တီး နုငိစ်မွ်း ရှတိဲ့ ဘ၀၊ အမြင်ြ့ မတ်ဆုးံ ဘ၀၊ တန်ဘိုး အရှဆိုံး ဘ၀ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒဘီဝကို အချည်းနှီး ဖြစ်စေ၊ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ အစစအရာရာတွင် လုေ့  န၊ မကောင်းတဲ့ လုပရ်ပ်များကြောင့် မကောင်းတဲ့ ဘုဘံဝများမှာပဲ လူးနေရတဲ့ ဘ၀များအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နငို တ်ာလည်း လူပြဲ ဖစ်တဲ့အတွက်
လူသားများဟာ လူပသီတဲ့ လူများဖြစ်စေဖု၊ိ့ လုနေရသည့် လူများမဖြစ်စေဖုနိဲ့ လူးနေရတဲ့ လူများမဖြစ်စေဖို့ အသိဉာဏ်ပညာပါတဲ့ အားထုတမ်ကှုို လက်ကိငုထ်ားပြီး စေတနာကောင်းနဲ့ ကုယိလ်ချိုင်တအဲ့ ရာကို
ရအောင်ကြိုးစားဖုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရရှလိာတဲ့ တန်ဘိုး ရှတိဲ့ လူအဖြစ်ကို လုရင်း၊ လူးရင်းနဲ့ အချိန် မကုနြ် ကစေဘဲ အကြောင်းအကျိုး၊ အကောင်းအဆိုး၊ ကုသလိုအကုသလို က်ို သိရလှိ ကိုနာကျင့သ်ုးံ ပြီး စေတနာကောင်းပါတဲ့ လုပရ်ပ်များနဲ့ လူပသီတဲ့ လူများဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တုကိတ်ွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစမလုပန်ဲ့ အဆုးံ မရှိ ဖြစ်တတ်တယ်… စိတဆ်တိုာကလည်း သိတအဲ့ တုငိ်း မကောင်းတဲဘ့က်မှာ ပဲ ပျော်မွေ့တတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပက်ို
လုပဖ်ို့ခက်သလောက် မကောင်းတဲအ့လုပက်ျတော့ အချိနမ်ရွေး အလွယတ်ကူ ထလုပြ် ဖစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့ အလုပ၊် မကောင်းတဲ့ အကျင့ဟ်ာ လုပဖ်လို့ ယွ်၊ ဖြစ်ဖလို့ ယွတ်ဲ့ အတွက် စပြီး
မလုပမ်ေိအာင် ကြိုးစားဖုနိဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ၊် ကောင်းတဲ့အကျင့က်တော့ လုပဖ်ြို့ ဖစ်ဖို့ ခက်တအဲ့ တွက် ချက်ချင်းထလုပန်ိုင်ေအာင် ကြိုးစားကြဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အလုပ၊် မကောင်းတဲ့
အကျင့ဟ်ာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး ဆိုပြီး စမ်းသပ်တဲ့ သဘောနဲေ့  တာင် မလုပမ်ြိ ကဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူများလုပတ်ာတွေ့လို့ လုပြ် ကည့တ်ာမျိုး၊ သူမျိုးတုကိတ်နွ်း လို့ လုပြ် ကည့တ်ာမျိုးကအစ
ဘယ်လသို ဘောမျိုးနဲမ့  ကှို မလုပမ်ြိ ကဖို့ သတိပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လလို့ ည်းဆုေိတာ့ အဲဒလီို စမ်းသပ်တာ၊ စမ်းလုပတ်ာကစပြီး နောက်ပငိုးဖြတ်ဖို့ ခက်လာကာ ဘ၀ကို ဒုက္ခြ ဖစ်စေနုငိတ်အဲ့ ထိ ဖြစ်သွားတတ်လပိဲု့ဖြစ်ပါတယ်။
မာနလေးတွေ လျှော့ကြည့ပ်ါ… မာနဟာ တက်ကြွခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်း သဘောရှိပါတယ်။ မာနအားကြီးလာရင် အရုအိသေ ပြုတတ်တဲ့ ဂါရ၀တရားတွေ ခေါင်းပါးလာတတ်ပါတယ်။ မာနကြီးလာရင် ကုယိက့် ယို က်ို နှမိ့်ချတတ်တဲ့ နိဝါတ တရား
တွေ ဆုတယ်တုလ်ာတတ်ပါတယ်။ ဂါရ၀၊ နိဝါတဆုတိာ မင်္ဂလာ တရားတော်တွေပါ။ မာနကြောင့် ဒီမင်္ဂလာ တရားတွေ မရြှိ ဖစ်လာရင် ကုယိသ့် န္တာန်မှာ ကျက်သရေ မရှိဖြစ်လာတာနဲ့ အတူတပူါပဲ။ မင်္ဂလာမရှဘိူး ဆိုရင် အမင်္ဂလာပဲပေါ့။ အမင်္ဂလာဆုတိာ အကုသလို ပ်ါပဲ။ ဒါဆုရိင် မင်္ဂလာမရှတိသဲ့ ဟူာ အကုသလိုရှေိနတဲသ့ပဲူ ပေါ့။ သေချာဆက်စပ် တွေးကြည့လ်ကိုတော့ မာနတရား လက်ကငို ထ်ားမိတဲ့ အတွက် ကုယိက်ယို တ်ိုင် အကုသလိုေ် ကာင်ကြီး ဖြစ်မနှ်း မသိ ဖြစ်နေတော့တာပါ။ မာနဆုတိဲ့ ကိလေသာဟာ သူက့  စွိုဲကငို ထ်ားတဲ့
သူတွေကို မင်္ဂလာမရှေိအာင်၊ အကုသလိုကောင် ဖြစ်အောင်အထိ တွန်း ပုနိ့ ငို တ်ဲ့အတွက် မာနတရားဟာ မထားသင့်၊ မရှသိင်တ့အဲ့ ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပညာတွေ ဘယ်လောက်တတ်တတ် မာနကြီး
ပါက အရုအိသေမဲတ့တ်ပါတယ်။ ရုပအ်ဆင်းအင်္ဂါ ဘယ်လောက်ပလဲလှ မာနကြီးပါက စက်ဆတုရ့်ွံ ရှာခံရ တတ်ပါတယ်၊ ရာထူးဌာနန္တရ ဘယ်လောက်ပြဲ ကီးကြီး ခက်ထန်မောက်မာပါက အမုန်း ခံရတတ်ပါတယ်။
စာသင်စာပြ တရားဟော တရားပြ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း မာနကြီးပြီး ခက်ထန်မောက်မာပါက အကဲရဲ့ခံကာ ရှောင်ပယ်ခရံတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မာနရဲ့ ဆုိး ကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ဆုိး ကျိုးတွေ မဖြစ်အောင် မာနလေးတွေ လျှော့ကြပါလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဒ့က္ခုငြိမ်း ရာဆုတိာ… တစ်ချို့ဆင်းရဲ့တဲ့ နုင်ိငကံလူများက ချမ်းသာတဲ့ နုငိင်ကံအိုားကျကြ၊ ချမ်းသာတဲသူ့တွေကို ကြညြ့် ပီး “သူတေို့ တွ ဒုက္ခြ ငိမ်း လုကြိ် ကတာ”လို့ ဆုတိတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နာမ်ရပုန်စှခ်ုနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေ မှနသ်မျှ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်နိငုင်၊ံ ဘယ်ဒေသမှာပဲရရှိ ဒုက္ခြ ငိမ်း တယ်ဆတိုာမရှပိါဘူး။
ဒုကက္ခ ယို စ်ီပကိုြ် ပီး နေနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာဝန်လက်စ မသိမ်း သေးသမျှ ဒုက္ခြ ငိမ်း ဖုဆိ့ တိုာ
မဖြစ်နငို ပ်ါဘူး။ နောက်ထပ်တစ်ဖန် ဘ၀သစ်ကို မဖြစ်စေနုငိေ်တာ့တဲ့ ကိလေသာကုနခ်မ်း နိဗ္ဗာ န်လမ်းကို မရောက်သေးသမျှ ခန္ဓာဝန်လက်စ သိမ်း နုငိမ်ှာ မဟုတဘ်ဲ ခန္ဓာရှေိနသူမနှသ်မျှ ဒုက္ခြ ငိမ်း တယ်ဆတိုာမရှပိါဘူး။ သူ့ဒကုန္ခဲ့ သူဆတိုာရှေိနကြတာပါပဲ။ မရှေိတာင်တ့၊ ရှေိကြာင်ြ့ ကလို့ ဆုသိလို မရှေိတာ့လဲ
မရှလိတိုဲ့အလျှောက်၊ ရှိတော့လည်း ရှတိအဲ့ လျှောက် ဒုက္ခြ ဖစ်တာပါပဲ။ အမှနအ်ကြွင်း မဲ့ ဒုက္ခြ ငိမ်း စေနုငိတ်ာ ကတော့ ခန္ဓာကုယိတ်ငွ်း မှာ ရှတိဲ့ ကိလေသာတွေငြိမ်း မှ အလုးံ စြုံ ငိမ်းမှာပါ။ ဒါကြောင့် တကယ့် ဒုက္ခြ ငိမ်းရာ ဟာ ကိလေသာအပေါင်း ငြိမ်းရာပါလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုယိက်ျင့်သီလ… ပါးစပ်က ဗုဒဘ္ဓာသာလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော၊ သီလတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ယူယူ လက်တွေ့အားဖြင့် ကုယိက်ယို တ်ငိုရအောင်မကျင့်နငိုေ် သးရင်တော့ ကုယိက်ျင့သ်လီတွေ ရနေတယ်၊ တည်နေတယ်လို့
မပြောနိုင်ေသးပါဘူး။ ကုယိက်ျင့မ်ှ ကုယိရ်မှာဖြစ်တဲ့ ဒီသလီဟာ ကုယိက်ယို တ်ငိုပဲ လုပယ်ရူပါတယ်။ သူများပေးလို့ မရပါဘူး။ တောင်းပြီးယူရတဲ့ အရာမဟုတဘ်ဲ ကုယိက်ယို တ်ငိုကျင်သ့ုးံ ပြီး ရယူရတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
မဖြစ်ပါရစေနဲ…့  ပုထဇုဉ်တွေဟာ အမြဲလချိုင်နေတတ်၊ ရချင်နေတတ်၊ ဖြစ်ချင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင်လ့ည်း ဘာလေးပဲ လုပလ်ပု လုချိင်ဖြစ်ချင်ရချင်တဲ့ စိတဆ်န္ဒတွေနဲ့ တောင်တ့ကြပါတယ်။ ဒီစတိေ်ကြာင်ပဲ့ ဘာကုသလိုလေးပဲ လုပလ်ပု ဖြစ်ပါရစေ၊ ရပါရစေ စသဖြင့် ဆုတောင်းလေ့ရြှိ ကပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေက များတဲအ့တွက် ကုသလိုေ် လးကနဲနဲ တောင်းတာတွေက အများကြီး ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကုသလိုေ် ကာင်းမှုလပုတ်သဲူ့
အတော်များများရဲ့ အသံတွေ နားထောင်လကိုရင် သူတြို့ ပုတဲ့ ကုသလို အ်ပေါ် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ တောင်းနေကြတာကို ကြားနေရမှာပါ။ မဖြစ်ပါရစေနဲလ့ို့ ဆုတောင်းပြီး ကုသလို လ်ပုသ်ူ အတော်ရှားလှပါ တယ်။ တကယ်လို့ မဖြစ်မနေ တောင်းချင်တယ်ဆိရုင်လည်း ဖြစ်ပါရစေလို့ တောင်တ့နေမယ့်အစား
လောဘမဖြစ်ဖို့၊ ဒေါသမဖြစ်ဖိ့၊ု မောဟမဖြစ်ဖိ့၊ု မာနမဖြစ်ဖ၊ို့ ဣဿာ၊ မစ္ဆရယိမဖြစ်ဖို့ စသဖြင့် တောင်းတာ က ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ပြည့ဝ်၊ အနှစသ်ာရ ရှပိါတယ်။ ဖြစ်ပါရစေလို့ပဲ ဆုတောင်းဆုတောင်း မဖြစ်ပါရစေနဲလ့  ပိုဲ့တောင်တ့တောင့တ်အမှန်ေတာ့ နှစခ်လုးံ တောင်တ့တာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပါစေလို့ တောင်တ့မှုက
တော့ သံသရာရှညမ်ကှုို ဖြစ်စေတတ်ပြီး မဖြစ်ပါရစေနဲလ့ို့ တောင်တ့မှုကတော့ လွတ်ေမြာက်မကှုို ဦးတည် စေပါတယ်။ ဘယ်လပိုဲဖြစ်ဖြစ် ဆုတောင်းနေ့ဖထို့ က် လက်တွေ့ကျင်ြ့ ကံဖကို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို
ကျင်ြ့ ကံတဲ့အခါမှာတော့ ဦးတည်ချက် မှနဖ်လို့ ပိုါတယ်။ တစ်ချို့ ကုသလိုတွေ အမျိုးမျိုး လုပြ် ကပါတယ်။ ဒီလလို ပုေ်နကြပေမယ့် ဦးတည်ချက်ကတော့ လူ့စည်းစိမ် နတ်စည်းစိမ် စတာတွေကို ရစေဖြုိ့ ဖစ်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ ဒီစည်းစိမ်ေတွကို မရည်ရယွပ်ါဘူး။ လောဘကင်းမှု၊ ဒေါသကင်းမှု၊ မောဟကင်းမှု၊ နိဗ္ဗာ န် မျက်မှောက်ပြုမှုတွေကို ဦးတည်ပါတယ်။ ဒီဦး တည်ချက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ပါရစေဆုတိာတွေနဲ့ ဆန်က့ျင်ပြီး မဖြစ်ပါရ စေနဲ့ ဆုတိာကို ရည်ရယြွ် ကပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်ပါရစေနဲလ့ို့ ရည်ရယွမ်ကှုတော့ လွတ်ေမြာက်မအှုတွက်
ဦးတည်ချက်ကောင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်ပါရစေဆုတိာထက်၊ မဖြစ်ပါရစေက ပုေိကာင်းပါတယ်။
အသေကောင်းဖု…ိ့် လောကသားတွေဟာ နေဖုအိ့ တွက် ကြိုးစားကြသလို သေဖုအိ့ တွကလ်ည်း ကြိုးစားသင်ြ့ ကပါတယ်။ အနေကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ကြသလို အသေကောင်းအောင်လည်း ပြင်ဆင်ကြဖို့ လုပိါတယ်။
နေတဲအ့ခုကိမ်ှာ မတောင်မ့တ မကြောင်မ့ကျ နေနုငိေ်အာင် အားထုတြ် ကသလို သေတဲအ့ခုကိမ်ှာလည်း မပူမပင် မပင်မပန်း သေနုငိေ်အာင် အားထုတသ်င်ြ့ ကပါတယ်။ မတောင်မ့တ နေနုငိေ်အာင် ရှာဖွေကြရင်း
မကြောင်မ့ကျ သေနုင်ိအောင်လည်း ရှာသင်ပ့ါတယ်။ ဆုလိတိုာက ဘ၀နေဖုအိ့ တွက် ငွေကြေးပစ္စည်း ဥစ္စာ ရအောင်ရှာ ရင်း နေခြင်းရဲ့နောက် သေခြင်းအတွကလ်ည်း သတိတရား လက်ကငို ထ်ားနုငိေ်အာင် တရား
တစ်ခခု ရအောင်ရှာသင်ပ့ါတယ်။ ဒီလအို သေကောင်းဖို့ တရားရှာတဲအ့ခါ အကောင်းဆုကံတော့ ၀ိပဿနာ တရားပဲကောင်းပါတယ်။ ၀ိပဿနာ အားထုတဖ်ူး တဲသူ့ သတိပဋ္ဌာန်တစ်မျိုးမျိုးကို အထူးပြု အားထုတ် ဖူးသူတွေဟာ အနေကောင်းနေသူတွေဖြစ်ပြီး အသေကောင်းသူတွေဆလို ည်း မမှားပါဘူး။
တရားအားထုတထ်ားတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖို့ သာမန်သေူတွ မခံနငို တ်ဲ့ အကောင်းအဆုိး လောကဓံတွေကို ကောင်းကောင်းခံနိုငရ်ည် ရှလိာကြပါတယ်။ လောကသားတွေ ဒုက္ခေ ရာက်ကြ၊ ပျက်စီး ကြတယ် ဆုတိာ
လည်း ဒီလောကဓံကို မခံနငိုကြလုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တရားအားထုတြ် ခင်းဖြင့် လောကဓံကို ခံနိငုရ်ည် ရှေိနတဲ့
သူဟာ ဘာအခက်အခဲမဆို ခံနိငုရ်ည်ရှိနေတဲ့ အနေကောင်းသူတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီအလုပက်ို
အားထုတရ်င်း ဒီအတုငိ်း ပဲ အမှတသ်တိ မပြတ်ရသွှိားမယ်ဆရို င် အသေလည်းကောင်းမှာ သေချာပါတယ်။
ဥပေက္ခာပြုလုက်ိပါ… လောကမှာ လုပယ်လူ၊ို့ ပြုပြင်လို့ မရတဲ့ အရာတွေ၊ မရတဲသ့ေူတွ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို
မရရအောင် ပြုပြင်နေရင် ကုယိပ်ဲစတိပ်င်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကုယိလ့် မ်း ကုယိေ်လျှာက် နေချိနမ်ှာ သူတစ်ပါးကို အမြှီ ပုပြီး ကုယိက်ယို တ်ငို ပ်ါ နစ်မနွ်းလာနုငိပ်ါက အဲလအို ရာမျိုး၊ အဲလလို မျူိုးကို
ရှောင်ဖလိုို့၊ ဥပေက္ခာပြုလုကိဖ်ို့ လိုပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ ဥပေက္ခာပြုတယ်ဆတိုာသူတစ်ပါးကို အမြှီ ပုပြီး ကုသလို လ်ည်းမဖြစ် အကုသလို လ်ည်း မဖြစ်အောင် နေလုကြိ် ခင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသလိုမရချင် နေပါစေ အကုသလိုမဖြစ်ဖေို့ တာ့ လုပိါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဥပေက္ခာပြုကြည့လ်ကို လ်ို့ အပြုခံရတဲသ့ဟူာ
နောင်တရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သွားတတ်တာလည်း ရှပိါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဥပေက္ခာ ပြုလုကိတ်ဲ့ အတွက် ကုယိက်ယို တ်ငိုအရင်ဆံုး သက်သောင်သ့က်သာ ဖြစ်သွားတယ်ဆတိုာတော့ အမှနပ်ါပဲ။
ဒါကြောင့် တစ်စတုံ စ်ခ၊ု တစ်စတုံ စ်ယောက်ကို အကြောင်းပြုလို့ အကုသလိုြ် ဖစ်မယ်၊ စိတပ်င်ပန်းလူပင်ပန်း ဖြစ်မယ်ဆရို င် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လစ်လျူရှုနိငုေ်အာင်၊ ဥပေက္ခာပြုနုငိေ်အာင် ကြိုးစားကြပါလို့ ဆြုိ ခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမသိ မှနြ် ကည့ပ်ါ… မှနဟ်ာ ကြည့သ်မျူားကို အရှိအတုငိ်း ထင်ရှားစေသလို ကံတရားဟာလည်း ပြုသူများကို မျက်နှာ လုကြိ် ခင်း၊ မျက်နှာသာပေးခြင်း မရှဘိဲ အရှိအတုငိ်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှေိစပါတယ်။ မှနြ် ကည်တအဲ့ ခါ မြန်မာပဲ
ကြညြ့် ကည့် ကိုရီးယားပဲကြည်ြ့ ကည်၊့ အမေရိကန်ပြဲ ကည်ြ့ ကည့်၊ ဂျပန်ပြဲ ကညြ့် ကည်၊့ ဖြူသူပြဲ ကညြ့် ကည့် မဲသပြူဲ ကည်ြ့ ကည့် ဘယ်သပဲူကြည့်ကြည့် မှနမ်ှာပေါ်လာတဲ့ ထင်ဟပ်မဟှုာ အရှအိတုငိ်း ပင် ဖြစ်ပေါ်စေ သလို ကံတရားဟာလည်း ဘယ်နငိုငံ၊ ဘယ်လမျူိုးက ဘာအလုပက်ပိုဲလုပလ်ပု တန်ပြန်အကျိုး
သက်ရောက်မမှုာ အဲဒသီတူို့ ပြုတဲ့အတုငိ်း ၊ သူတိ့စုတိေ်စတနာ အတုငိ်း ပဲ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ကံတရားရဲ့ အကျိုးပေးမှုမှာ ဂုဏပ်ကာသနမရှ၊ိ ရာထူးဌာနန္တရမရှ၊ိ ပစ္စည်း ဥစ္စာမရှိ သတ္တ၀ါမှနသ်မျှအပေါ် တစ်ပြေးညီ
တည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကုယိဘ်ာပဲလပုလ်ုပ် ကုယိလ်ုပတ်ဲ့အလုပဟ်ာ ကုယိက့်ြို ပန်ပြီ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မှနြ် ကညြ့် ပီး လုပြ် ကဖို့ တုကိတ်နွ်း ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရှင် ၀ိစတ္တိ (မနာပဒါယီ)
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၄)... သံသရာကြွေး မတင်ပါစေနဲ့… အခုဘ၀မှာတောင် အတိတဘ်ဝတွေက လုပခ်တဲ့အကြွေးတွေကို ကျေအောင်မဆပ်နငိုသေးဘဲ လက်ရှိ လုပ်ေနတဲ့ ကုယိရ့့်ဲ မကောင်းတဲ့ လုပရ်ပ်တွေကြောင့် နောက်ထပ် ပေးဆပ်ရမယ့် သံသရာနဲခ့ျီတဲ့ အကြွေး
တွေ ထပ်တိးု နေမယ်ဆရို င်တော့ အကြွေးကင်းရာ နိဗ္ဗာ န်နကဲ့ တော့ ဝေးပြီးရင်းဝေးရင်း ဖြစ်နေပါလိမမ့် ယ်။ ကုယိ့်ရဲ့လုပရ်ပ်တစ်ခဟုာ စေတနာပါပါနဲ့ လုပလ်ကို မ်ရိင် အကြွေးဖြစ်စေပါတယ်။ အကြွေးဆုရိင်တော့
ပေးဆပ်ရမှာပါ။ ထုးံ စံအတုငိ်း ပေးဆပ်တအဲ့ ခါ အရင်းရော အတိုးရော ပေးဆပ်ရသလို ဘာမှမဟုတပ်ါဘူး ဆြုိ ပီး လုပလ်ကို တ်ဲ့ မကောင်းတဲ့ လုပရ်ပ်တစ်ခဟုာ သူရ့့ဲ တန်ပြန် အကျိုးပေးကို ခံရတဲအ့ခါမှာ ပေးဆပ်ရ
တဲ့ အတိုးက ဖော်မပြနိုင်ေအာင် များပါတယ်။ တစ်ချို့အတုိး တွေဆို အောက်ကနေ ပြန်မတက်နငိုလောက် အောင်၊ ဘုရားပွင့်သော်လည်း ဘုရားသာသနာနဲ့ ကြုံခငွမ့် ရအောင်၊ အကြွေးဆပ်ပြီးပြန်တော့လည်း
ကောင်းတဲ့ သုဂတိဘ၀မှာ ကောင်းကောင်းမွနမ်နွ် မဖြစ်သေးဘဲ အုနိာကျိုးကန်းအဖြစ် ပြန်ဖြစ်အောင်အထိ
အပုေိပးဆပ်လကို ရ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အတုိး ပေါ် အတိုးထပ်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ လုပရ်ပ် တစ်ခေုကြာင့် ပေးဆပ်ရတဲ့ အကုသလို အ်ကြွေးရဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုေိပြာတော့ ကံကရံဲ့ အကျိုးပဲပေါ့။
ရုပက်ပိုဲပြင် စိတမ်ပြင်လျှင်… အပုတ်ေကာင် ဖြစ်နေတဲ့ ဒီရပုဟ်ာ နေ့စဉ် ပြင်နေရပါတယ်။ နေ့စဉ် သန့်ရငှ်း အောင် လုပ်ေနရပါတယ်။
တစ်နေ့မပြင်ရင် တစ်နေ့အနံထ့  ကွေ်နတာ ဆုေိတာ့ နေ့တိငုး နေ့တငိုး မရုိး နိုင်ေအာင်ကို ပြင်နေရပါတယ်။ မပြင်ဘဲ ထားမယ်ဆိရုင်လည်း ခန္ဓာကုယိမ်ှာ ရှတိဲ့ အပေါက်တွေက ထွကလ်ာသမျှ အရာဟာ ဘာတစ်ခမှု ကောင်းတာမရှေိတာ့ ရွရှာံဖွယ်ပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဒါကလည်း ဒီရပုတ်ရားဟာ အကောင်ပတုဆ်တိုာ
သိနငို တ်ဲ့ အသိဉာဏ်ရမှိဖြစ်မှာ ပါ။ တစ်ချို့ မသိကြတော့ ဒီအပုတ်ေကာင်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ေကာင်ကပိုဲအဟုတ် ထင်ကာ မာနတွေ ၀င်နေကြပါတယ်။ အပေါ်ယံအရေပြားကို ရွှေအလား ထင်မတြှ် ပီး အမျိုးမျိုးနဲ့ ချယ်သ နေကြပါတယ်။ နောက်ဆုးံ တော့ ပြင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဒီရပုဟ်ာ သေရင်ထားခဲ့ရမယ့် အကောင်ပတုဆ်တိုဲ့
အမည်ပညတ်တစ်ခပဲု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကို မသိတော့ ဟန်ဆောင်မမျှုားနဲအ့  တူ အခိကုအ်တန်သ့ာဖြစ်တဲ့ ပြင်ထားတဲရ့ပုအ်ပေါ် အစဲတွရားတွေနဲ့ အလဲအွမှား စိတထ်ားတွေအထိ ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပက်ိအုမြှီ ပုပြီး စိတပ်ါဒုက္ခ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ရုပက်ို သန့်ရငှ်း အောင် လုပ်ေနပေမယ့် စိတက်ို
မသန့်ရငှ်း မိကြတော့ အကုသလိုအညစ်အကြေးတွေနဲ့ လောဘမျက်နှာ ၊ ဒေါသမျက်နှာ၊ မောဟမျက်နှာ ၊ မာနမျက်နှာ ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရယိမျက်နှာတွေအဖြစ် ပြောင်းပြောင်းနေကုန် ပါတော့တယ်။ လှချင်လို့
မျက်နှာကို ခဲစွပြိ် ပုပြင် အလှဆင်ပေမယ့် ပုပိလို မှလာဘဲ ကိလေသာလွှမ်း တဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ အိုအလို သို့ာပြုိ ပလာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် လှချင်လို့ ပြင်ကြရင်လည်း ရုပက်လို ည်းပြင် စိတလ်ည်းပြင်ကြပါလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုပမ်လှပေမယ့် စိတလ်ှေနရင် လူလည်းလှလို့ အခုဘ၀မှာရော သံသရာမှာပါ အလှတရားတွေ ပိုငဆ်ငိုနေရမှာ အမှနပ်ဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးမထပ်ပါစေနဲ…့  အကြွေးဆပ်နေရတဲ့ ကုယိဘ့် ၀ကို မမေ့ကြပါနဲ။့ အတိတဘ်ဝတစ်ခခုကုတင်ကျန်လာတဲ့ အကြွေးတွေကို ဒီဘ၀မှာ လာဆပ်ရင်း အကြွေးပေါ် အကြွေးမထပ်အောင်၊ အတုိး ပေါ် အတိုးမထပ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့
လိပုါတယ်။ ဒီလြို ကိုးစားတဲ့အခါ တစ်ဘ၀တစ်နပ်စာကို ကြညြ့် ပီး ဖြစ်သလို မလုပြ် ကပဲ သံသရာနဲခ့ျီကာ ပေးဆပ်ရမယ့် အတုိး ကြွေးကို တွေးလို့ ကြိုးစားလုပက်ငိုြ် ကဖို့ လုပိါတယ်။ မကောင်းတဲ့ စိတ်ေစတနာနဲ့ လုပတ်လဲ့ ပုရ်ပ်များရဲ့ အကြွေးအတိုးဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကြီးမားတယ်ဆတိုာသဘောပေါက်ပြီး ဘာပဲလပုလ်ပု ကောင်းတဲစ့တိ် စေတနာလေးတွေနဲ့ လုပြ် ကရပါမယ်။
သေချာတာကတော့ အကြွေးရှရိင် ဆပ်ရမယ်ဆတိုာပါပဲ။ အဓိကကတော့ “အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးထပ် နေသူများ မဖြစ်စေကြဘဲ အကြွေးဆပ်ရင်း အကြွေးမထပ်အောင်သာ ကြိုးစားကြဖု”ိ့ ပါပဲ။
စိတအ်ညစ်အကြေး စိတန်ေဲ့ ဆး… မြတ်ဗဒုက္ဓ တော့ စိတက်ို အထူးသတိပြုဖို့ အမြဲမနိ့်တော်မပူါတယ်။ စိတက်ြို ပင်ဖို့ အမြဲတကို တ်နွ်းတော် မူပါတယ်။ ရုပက်ို သန်ရ့  ငှ်းအောင် ပြုပြင်ကြသလို စိတက်လို ည်း သန်ရ့  ငှ်းအောင် ပြုပြင်ကြဖို့ အထူး
ဟောတော်မူပါတယ်။ ရုပမ်ှာ အညစ်အကြေးတွေ စွန်း ထင်လာတဲအ့ခါ သန်ရ့  ငှ်း အောင် ဆေးကြောပေးရ သလို စိတမ်ှာ အညစ်အကြေးတွေ ဖြစ်ရင်လည်း သန်ရ့  ငှ်းအောင် ဆေးကြောပေးကြဖို့ ညွနြ် ပတော်မူ
ပါတယ်။ “ရေကြောင်ြ့ ဖစ်တဲ့ ရွှံ့ ပေရင် ရေနဲ့ဆေးမှပဲ သန့်ရငှ်း သွားတတ်သလု၊ိ စိတ်ေကြာင်ြ့ ဖစ်တဲ့ အညစ်
အကြေးဟာလည်း စိတန်ေဲ့ ဆးမှပဲ သန့်ရငှ်း နိုင်ေကြာင်း..” ဆုးံ မတော်မပူါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ စိတမ်ညစ် စေဖုပိ့ါပဲ။ စိတမ်ှာ အညစ်အကြေးတွေ မဖြစ်ဖပို့ါပဲ။ အကယ်၍ စိတမ်ှာသာ အညစ်အကြေးဖြစ်ပြီး စိတည်စ်
နွမ်းပြီဆပိုါက ရုပက်ို ဘယ်လောက်ပဲ လှအောင်ပြင်နေပါစေ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီး ပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြောင်း သတိပြုကြဖို့ လိုအပ်လပှါတယ်။
ရုပက်ိုလည်းပြင် စိတလ်ည်းပြင်… နေ့စဉ်နေ့စဉ် ရုပက်ြို ပင်နေကြသလို စိတက်လို ည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ကောင်းတဲစ့တိ်၊ ကိလေသာ နည်းတဲစ့တိ၊် ဒေါသနည်းတဲစ့တိ၊် မာနနည်းတဲစ့တိ်၊ မနာလုမှို၊ ၀န်တမှိုနည်းတဲစ့တ်ိလေးတွေ ဖြစ်အောင် မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ့ ပြုပြင်ပေးကြညြ့် ကဖု၊ိ့ စိတ်ေကြာင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အညစ် အကြေးများကို စိတန်ပဲ့သန့်ရငှ်း အောင် ဆေးကြောပြုပြင်ပေးကြဖို့၊ ရုပက်ြို ပင်ဖို့ အချိန၊် လူ၊ ငွေ၊ ပစ္စည်း စတာတွေနဲ့ အားစုကြိ် ကိုးစား ပြုပြင်ကြသလို စိတက်လို ည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသတိတရားများနဲ့
ကြိုးစားအားထုတက်ာ ပြုပြင်ပေးကြဖို့ ဆုံးမဟောကြား ပေးကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင်တ့ာကတော့ ရုပက်လို ည်းပြင် စိတလ်ည်းပြင်တတ်ကြဖုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ခလုပမ်ထိခင် အမိတပါ… ခလုပထ်မှိ အမိတလို့ ဆိုကြပေမယ့် ခလုပထ်ေိအာင် စောင်မ့နေကြဘဲ ခလုပမ်ထိခင် ပြင်ဆင်ကြဖို့
လုပိါတယ်။ အမိတ,ချင်ရင် အမိက မ,နုင်ိချိန်မှာ တ,နုငိေ်အာင် ကြိုးစားကြဖုပိ့ါ။ ခလုပဆ်တိုာသွားရင်း လာရင်းနဲလ့  ည်း အသွားမတော်ရင် အချိန်မရွေး ထိနငို တ်အဲ့ တွက် သွားရင်းသွားရင်း အမိမကယ်နငို တ်ဲ့ အဝေးရောက်မှ ခလုပထ်လို့ အမိတ,မယ်ဆရို င် အမိလည်း မ မ,နုင်ိပါဘူး။ ကုယိထ်ကူယို ထ်ဆုသိလို ကုယိထ်ြူ ပီး ကုယိထ်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အဓိကကတော့ ထိမတှ,တာထက် မထိခင် ကြိုတင်ပြီး မထိအောင် သတိပြုဆင်ခြင်တာက ပုေိကာင်းပါတယ်။
ကျင့ယ်ပူါ.. လောကီပငိုး မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လောကုတပ္တငိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောင့တ်နေဖုထိ့ က် လက်တွေ့လုပ်ေဆာင် ကျငြ့် ကံ နေဖုကိ့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရချင်တာကို တောင်းပြီးယူတာထက် လုပြ် ပီးယူတာက လက်တွေ့ကျကာ
တန်ဘိးု ရှပိါတယ်။ တောင်းတဲ့အခါ တောင်းတုငိ်း မရနုငိေ်ပမယ့် ကျင်ြ့ ကံနငို ရ်င်တော့ ကျငြ့် ကံတအဲ့ တုငိ်း
ရနုငိပ်ါတယ်။ သူများပေးမှကမ်းမ ရမယ်အ့ရာကို စောင်မှေျ့ာ်တောင့တ်မနေဘဲ ကုယိက်ယို တ်ငိုကြိုးစား လုပက်ငိုြ် ပီး ရတာက ပြုိ ပီးအဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောင်းတယ်ဆတိုာဟာ အတောင်း
မတော်ရင် အမုန်း ရတတ်တအဲ့ ပြင် ကုသလိုရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုတောင်းမတော်ရင် တဏှာရဲ့ ချယ်လယှ် မှုနဲ့ နိမက့်ျတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်စေနုငိတ်ဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်းမနေကြဘဲ ကုယိက်ယို တ်ငိုကြိုးစား
အားထုတမ်ှု၊ ကျင်ြ့ ကံကျိုးကုတမ်ှေုတွနဲ့ လက်တွေ့ရအောင် လုပယ်ကျူင်ယြူ့ ကပါလို့ တုကိတ်နွ်း ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိတောင့တ်ရှေိကြာင့်ကြ… စည်းစိမဉ်စ္စာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေဟာ မရှရိင်လည်း တောင်တ့တတ်သလို ရှရိင်လည်း ကြောင့်ကြနေရတတ်တဲ့ အတွက် စိတအ်လိုအတုငိ်း လုချိင်တာနောက်ပဲ လုကိမ်နေကြဖို့၊ ရရှလိာတဲ့
အရာများအပေါ်မှာလည်း စိုးရိမ်ေကြာင်ြ့ ကမှုများနှင့် အလွနအ်ကျြွံ ဖစ်ကာ တွေးတောပူပင်မှု မများကြဖို့၊ ဒုကဆ္ခ တိုာမရှလိည်းဖြစ်၊ ရှလိည်းဖြစ်တအဲ့ တွက် မရှတိဲ့အခါမှာလည်း မရှတိအဲ့ တုငိ်း အတာနဲ့ လုချိင်
တောင့တ်မှုကို ထိန်း ချုပ်ပြီး ရှတိအဲ့ ခါလည်း ရှတိဲ့အပေါ်မှာ မာနမ၀င် သတိထင်ကာ စုရိမ်ေကြာငြ့် ကမှု
မများကြဖို့၊ မရှေိတာင်တ့ရှိကြောင့်ကြတတ်တဲ့ စည်းစိမဉ်စ္စာ ရာထူးဌာနန္တရ ဂုဏပ်ကာသနတွေ ရှိခြင်း မရြှိ ခင်းအပေါ်မှာ အကြောင်းပြုကာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရတှိဲ့ ဒုကအ္ခ ပေါင်းကို သတိပညာနှင့် စဉ်းစားဆင်ခြင် အသိဝင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
အာရုေံနာက်ကို စိတမ်လုကိေ်စနဲ.့ . လောကမှာ ဒုကအ္ခ ပေးဆုးံ အရာဟာ စိတပ်လဲို့ ဆိုကြသလို ဒီစတိေ်ကြာင့် ကုယ်ိအပါအ၀င် သတ္တ၀ါတွေ ဟာ ဒုကပ္ခ င်လယ် ဝေနေကြတာပါ။ အဲဒါ သူများက ဒုက္ခေ ပးလို့ မဟုတဘ်ဲ ကုယိစ့် တိက်ကုယိက့်ြို ပန်ပြီး
ဒုက္ခေ ပးလို့ ဖြစ်တာပါ။ လက်တွေ့ဘ၀မှာပဲ ကြည့်ကြည့်လေ စိတက်ဒုက္ခေ ပးနေတော့ တွေ့သမျှ အဆင်း၊
အသံ၊ အနံ့စတဲ့ အာရုေံတွအပေါ်မှာ လုကြိ် ပီးကုယ်ိပါ ဒုက္ခြ ဖစ်နေတာ။ သိတဲ့အတုငိ်းပဲ စိတက်သူကြိုက်တဲ့ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံစ့  တာတွေဆို ခဏခဏ လုချိင်နေပြီး သူမကြိုက်တဲ့ အဆင်း၊ အသံစတာဆို ထစ်ခနဲဆို စိတတ်လို ကို၊ စိတ်ေကာက်လကို၊ စိတည်စ်လကိုဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ပုဆိးု တာက ဒီစတိက်တစ်သမှတ်
တည်း မရှတိာပါ။ လုရိင်တစ်မျိုး မလုရိင်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ စိတက်ကြိုက်လို့ လိုချင်နေတာကို ကုယိက်ပါလုကြိ် ပီး နေလုကိ့ တော့ ရှာပေတော့လပိုဲ့ပြောရမလြုိ ဖစ်နေတယ်။ ဆုးံ ကို မဆုးံ နုငိေ်တာ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတက်ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် သူက့ို အဲဒီအဆင်း၊ အသံစတဲ့ အာရုံနောက်ကို မလုကိ် အောင် ထိန်းဖုေိ့ ပြာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျက်စီး ချိနတ်န်လို့ ပျက်စီး နုငိေ်ပမယ်.့ . ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ရှုးံ နိမြ့် ခင်း၊ ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်း စတာတွေဟာ လောကဓံတရားများ ဖြစ်သလို အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်နေတဲ့ တရားများလည်း ဖြစ်တအဲ့ တွက် အချိနတ်န်ရင် မလဲမွသွေ
ကြုံတွေ့ရမယ် ဆုတိာကို နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့် လိုအပ်ပါတယ်။ အပျက်မမှဟုတ် အဖြစ်လည်း အချိနက်ာလကျလာရင် ဖြစ်လာတတ်၊ ရောက်လာတတ်တယ်ဆတိုာသိရထှိားပြီး အကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အဆုိး ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်သမျှကို “ဒါလည်းပဲ ပြီးသွားမှာပါပဲ” ဆုတိဲ့ ခံယချူက်နဲ့ အမှတသ်တိ မပြတ်ရကှိာ
ရင်ဆိငု နုင်ိအောင် ကြိုးစားကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကောင်းအဆုိး လောကဓံကို ခံနငိုြ် ခင်းဟာ မင်္ဂလာ တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဘ၀အောင်မြင်တိးု တက်ရေးရဲ့ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျက်စီး ချိနတ်န်လို့ ပျက်စီး နိုင်ေပမယ့် ပျက်စီးမှုနငှ့် ကြုံတွေ့တဲအ့ခါ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ့ ရဲရရဲင်ဆငိုကျော်လွားနိုငရ်င် အထိနာ အကျနာ သက်သာနိုငမ်ှာ ဖြစ်လို့ ပညာတရား၊ သတိတရား မမှားရအောင် အကျင့တ်ရား မချွတ်သွားးဘဲ ကြိုးစားကျငြ့် ကံ နေထုငိဖ်ို့ တုကိတ်ွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စိတအ်ားဖြည့စ်ကားစုလေးများ (၅) အလုကျိချင်ရင် မလြုိ ကနဲ…့  လူတိငုး လူတငိုး တစ်ခခုေုတာ့ အလုမိကျ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အလုမိကျ ဖြစ်တယ်ဆတိုာအလုရှိနေကြလုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အလုရှိေိ နတဲအ့တွက် ကုယိလ်တို အဲ့ တုငိ်း မဖြစ်တော့ အလုလို အားမရ
ဖြစ်ကာ မလိုချင်တာရပြီး အလုမိကျ ဖြစ်ကနုတ်ာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုေိနသမျှ အလိုမကျ ဖြစ်နေမှာ အမှန် ပါပဲ။ လုချိင်ဖြစ်ချင်တာတွေ များလေလေ အလိုမကျတာတွေ များလေလေပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။
ဘာဖြစ်လလို့ ည်းဆိုတော့ ဖြစ်ချင်တငိုး ဖြစ်လမို့ ရတဲ့ လောကမှာ ဖြစ်နေတဲအ့တွက်ေကြာင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်နေမယ်ဆရို င် မမြဲခြင်းသဘော မရှေိတာ့ဘဲ မြဲခြင်းသဘောပဲ ရှေိနမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
လောကကြီးဟာ မြဲတာတစ်ခမှု မရှဘိဲ မမြဲတာတွေပဲ ရှေိနလေတော့ အတ္တမဟုတ၊် အနတ္တဆတိုာအထင်
အရှား ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကို မသိတဲ့အတွက်ေကြာင့် ဖြစ်ချင်မလှုချိုင်မှေုတွနဲ့ ဖြစ်ချင်လချိုင်နေကြလုလိ့ ည်း သတ္တ၀ါတွေဟာ လုတိာမရဘဲ အလုမိကျ ဖြစ်ကနြု ကတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “အလုကျိချင်ရင် မလြုိ ကနဲ”့ လို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အသိအကျင့် ထပ်တြူ ဖစ်မ…ှသညာသိနဲ့ ပညာသိ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် စာအသိနဲ့ အကျင်အ့သိ၊ သုမိ့ ဟုတ် လေ့လာသိနငှ့် ကျင်ြ့ ကံ
သိများဟာ နည်းမှနလ်မ်းမှနန်ဲ့ သိထားဖို့ လုပိါတယ်။ ပိဋကတ်စာပေနဲ့ လောကီပညာရပ်တွေကို ကောင်း ကောင်းသိရှေိ နရုနဲံ့ မလုံလောက်ဘဲ အဲဒီအသိနောက်ကို အကျင့်ပါလုကိဖ်ို့် လုအိပ်ပါတယ်။
အကျင့အ်ားသန်လို့ အကျင့က်ို ကြိုးစားအားထုတတ်ဲ့ အခါမှာ နည်းမှနလ်မ်းမှနန်ဲ့ အကျင့်မနှရ်န် လုအိပ် ပါတယ်။ တစ်ပငိုး တစ်စ အကျင့မ်ျှ လောက်နဲ့ မှနတ်ယ်လို့ ယူဆပြီး အဟုတမ်ထင်ဖို့် သတိပြု ဆင်ခြင်
ရပါမယ်။ အဲလမှိုမဟုတရ်င် စာသမားလည်း အကျင့မ်ပါက မာန်ထောင်မတိတ်သလို အကျင့သ်မားလည်း စာအသိမရှိ၊ အကျင့မ်မှနပ်ါက အဆုံးမရောက်ဘဲ တလဲမွာန ၀င်တတ်ပါတယ်။ အဲဒလီို အသိရောအကျင်ပါ့ နဲနေဲလးလောက်နဲ့ ကုယိက့် ယို က်ို အဟုတထ်င်ကာ မာန၀င်မပိါက အမှနမ်နီး အချည်းနှီး ဖြင့် ဆင်းရဲအတိ ဖြစ်ကာ အပါယ်အထိပင် သက်ဆင်းနိုငတ်တ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိဋကတ်အစွယ် မထောင်ဘဲ အပါယ် ဘောင်မှ ရှောင်နငိုကြစေရန် အသိနအဲ့ ကျင့် ထပ်တဆူင်ရ့န် ကြိုးစားသင်ြ့ ကပါတယ်။
ကုယိက့် ယို က်ိုစစ် ကံမပြစ်နငှ…့် လောကမှာ အဆုိး တွေကြုံတငိုး ကုယိက်ယို က်ို မစစ်ဘဲ ကံနမိ့်နေတယ်ဆကိုာဟုေိမးဒီမေး ဟုလိပုဒ်လီပု လုကိလ်ပုတ်တ်တဲ့ သူတွေရပှိါတယ်။ ကုယိအ်ားကုယိက်ိးု ဖုထိ့ က် သူများကို သွားအားကုိး မိ တတ်ကြ
ပါတယ်။ ကုယိက့် ယို က်ို မယုဘဲံ သူများကို သွားယြုံ ပီး သူပြောတဲ့အတုငိ်း လုကိလ်ပ်ုနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒဘ္ဓာသားများဟာ ယုံကြည်မကှုို စူးစမ်းဆင်ခြင်မနှဲု့ ပေါင်းစပ်ဆင်ခြင်သင်ပ့ါတယ်။ နေရာတကာ အယြုံ ကည် မလွယသ်င်ပ့ါဘူး။ ဘယ်သမူပြု မိမမိဆှုသို လို သေချာတွေးကြည့ရ်င်
အဆင်ပြေမှု မပြေမှုဆတိုာကုယိက်ယို တ်ငိုလုပခ်တဲ့ လုပရ်ပ်တွေရဲ့ အကျိုးရလာဘ်ပါပဲ။ အကောင်းအဆုိး ဆုတိာက လူတငိုး ကြုံတွေ့ရမယ့် လောကဓံပါ။ လောကမှာ ရှေိနရင်တော့ အကောင်းတွေနဲ့ ကြုံနေတတ်ရ
သလို အဆုိး တွေလည်း ရောက်နေမှာပါပဲ။ ဒီလောကဓံကို ဘာပဲလာလာ ခံနိငုရ်ည်ရှိအောင် လုပရ်မှာ ကုယိ် ကုယိတ်ငို ပ်ါ။ ကုယိရ့်ဲ့ လုပရ်ပ်တွေကို ကုယိဆ်င်ခြင်ရမှာပါ။ အဲဒါကို ကုယိက့် ယို က်ို အားမကုိး ဘဲ သူများ သွားအားကုိး တော့ “ကံနမိေ့် နတာ အိမမ်ှာကိုးကွယထ်ားတဲ့ ကျောက်ဆင်းတုတော်က ခုကိလ်ပို့ါ၊ အဲဒီ
ဆင်းတုကို သွားစွနလ့် ကိုပါ” ဆုလို့ ခိုင်း တဲအ့တုငိ်း လုပရ်င်းက ကုယိပ်ါအပြစ်ဖြစ်ကာ ဘုရားမကြောက်၊ ကံမကြောက် ဖြစ်ကနုတ်ဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ နောက်ဆုးံ တော့ အားကုိး အရှာလြွဲ ပီး ဗေဒင်ဆရာ၊ လောက
ဓာတ်ဆရာတွေကို အားကိုးမိလို့ အဲဒဆီရာများ ရုကိတ်ာခံရတဲအ့တွက် မလုပသ်င်တဲ့ အကုသလိုအလုပ် ကို လုပြ် ဖစ်ကနုေ်တာ့တာပါ။ အမှနြ် ဖစ်သင်တ့ာက အဆုိး တွေ ကြုံနေ၊ အဆုိး တွေ များနေရင် အကောင်းကို များများလုပသ်င်တ့ာပါ။ အဆုိး တွေပြီးရင် အကောင်းတွေ လာလိမမ့် ယ်ဆတိဲု့ ခံယချူက်နဲ့ အဆုိး ဒဏ်ကို
ကြံ့ကြံ့ခံပြီး အကောင်းတွေပဲ ဖိလပုသ်င်ပ့ါတယ်။ အကောင်းတွေ လုပ်ေနရင်း အဆုိး တွေ ကြုံခရဲ့ င်တောင် တအားဆိုးဆုိး ၀ါးဝါးတော့ မဖြစ်နငို ပ်ါဘူး။ ဒီလမို ဟုတဘ်ဲ အဆုိး တွေကြုံလို့ သူများအားကိုးပြီး ခုငိ်း တဲ့
အတုငိ်း လုကိလ်ပ်ုမရိင် အဆုိး တွေဟာ ပြုိ ပီးဆုိး လာတတ်ပါတယ်။ အပါယ်လားစေနုငိတ်ဲ့ အဆုိး တွေအထိ
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုယိက့် ယို က်ို ပြန်စစိစ်ပါ၊ ကံကိချုည်းပဲ အပြစ်ပမုံ ချပါနဲလ့ို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အနှစရ်ှေိ သာ ကြီးရင့်ခြင်း.. တကယ်တော့ အသက်အရွယြ် ကီးတိုင်း အနှစရ်တှိာမဟုတပ်ါဘူး။ အသက်ရငှခ်ကို မ်ှာ အနှစရ်ှေိ အာင် နေထိုငသ်ွားနုငြိ် ခင်းကသာ အနှစရ်ြှိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနှစသ်ာရရှရိနှိဲ့ တစ်ရက်တစ်မနက် နေထုငိ် သွားနုငြိ် ခင်းကသာ အနှစမ်ရှဘိဲ နှစ်ေပါင်းတစ်ရာကျော် နေသွားခြင်းထက် သာလွန်ပါတယ်။
စာလုေိပြာရရင် ကုယိက်ျင်တ့ရားမကောင်း၊ ကုသလိုကောင်းမှုမရှဘိဲ နှစ်ေပါင်းအကြာကြီး အသက်ရငှ် နေရခြင်းထက် ကုယိက်ျင်သ့က္ခိာအပြည့န်ဲ့ တစ်နေ့တစ်ရက် တစ်မနက်လောက် အသက်ရငှ် နေထုငိ်
သွားရခြင်းက ပိုအနှစသ်ာရရှပိါတယ်။ ကုသလိုကောင်းမှုများနဲ့ တစ်နေ့တစ်မနက် နေ့ထငိုခြင်းကသာ အကုသလို တ်ရားများနဲ့ နှစ်ေပါင်းတစ်ရာကျော်မက အသက်ရငှ် နေထုင်ိရခြင်းထက် သာလွန် ကောင်းမြတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကြီးရင်သ့ွားနေကြတဲ့ သတ္တ၀ါတွေဟာ အသက်အရွယ် ကြီးရင့် လာတာနဲ့အမျှ ကုယိသ့် န္တာန်မှာလည်း ကုသလိုအနှစသ်ာရများ တိုးပွားနေအောင် ကြိုးစားနုငြိ် ကရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ သေရမယ့်အချိနက်ို တဖြည်းဖြည်းကူးသွားနေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ကြီးရင်ြ့ ခင်းဟာ ကုသလို တ်ရား၊ ကုယိက်ျင့တ်ရားများနဲ့ အနှစရ်တှိဲ့ ကြီးရင့်ခြင်းများဖြစ်ဖို့် လိုအပ်လပှါတယ်။ အဲဒလြီို ဖစ်အောင် အချိနရ်တှိ နုး ကြိုးစားကြဖုလိ့ ပိုါတယ်။
သူက့  သို တ်မှ တကယ်ပြတ်မှာ… လောကမှာ တစ်ချို့လူတွေဟာ ဒုကမ္ချိုးစုံနဲ့ ကြုံတွေရတဲ့အခါ မခံမရပ်နငိုြ် ဖစ်ပြီး နောက်ဆုးံ ကုယိက့် ယို က်ို အဆုးံ စီရင်ကာ သတ်သေတဲအ့ထိ ဘ၀ကို အရှုံးပေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒုက္ခေ တွငြိမ်းဖို့
အတွက် ကုယိက့် ယို က်ို သတ်သေလို့ မပြီးပါဘူး။ သူက့ို သတ်နငို မ်ှ ပြီးမှာ၊ ငြိမ်း မှာ၊ အဆုးံ သတ်မှာ ပါ။
သူဆတိုာက တစ်ခြားမဟုတပ်ါဘူး။ ဒုက္ခေ တွကို ဖြစ်စေတဲ့ တွယတ်ာမှု သံယောဇဉ်လေို့ ခ်ါတဲ့ တဏှာပါ။ အမှနဒ်က္ခြု ငိမ်းချင်ရင် ဒုက္ခြ ဖစ်ကြောင်း အကြောင်းတရားကို သတ်ရပါမယ်။ ဒီအကြောင်းတရားကို
သတ်နငို မ်ှ အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ ဒုကက္ခ ငြိမ်း မှာပါ။ စာလိုပြောရင် သမုဒယသစ္စာလုေိ့ ခ်ါတဲ့ တွယတ်ာမှု တဏှာကို ပယ်နငိုမှ ဒုကသ္ခ စ္စာလုေိ့ ခ်ါတဲ့ ဆင်းရဲဒကုအ္ခ ပေါင်းမှ ငြိမ်း အေးနုငိမ်ှာပါ။ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှု ပဋိစသ္စ မုပ္ပါ ဒ်နည်း အရပြောရရင် မသိမအှုဝိဇ္ဇာ၊ တွယတ်ာတပ်မက်မှု တဏှာတွေကြောင့် ဘ၀သံသရာ ကျင်လည်မှေုတွ တုိး ပွားနေပြီး အဆုံးမရြှိ ဖစ်ကာ ဒီဒကုသ္ခ သံရာမှကင်းရာ နိဗ္ဗာ န်နဲ့ ပိုပေို ၀းနေကြခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဒီသဘောတရားကို တစ်လနွဲားလည်ပြီး ``ခန္ဓာရှတိအဲ့ တွက် ဒီလိဒုကု္ခေ တွ ကြုံနေ ရတာဖြစ်တယ်၊ ဒီခန္ဓာမရှိရင် ဒီဒကု္ခေ တွလည်း ငြိမ်း မှာပဲ``ဆုတိဲ့ အတွေးနဲ့ ခန္ဓာမရှိအောင် ကုယိက့် ယို က်ို
သတ်သေတာတွေ လုပြ် ကပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ အလွနလ်မွှဲားတဲ့ နည်းပါ။ ဒီလို သတ်သေရုနဲံ့ ဒီဒက္ခုတွေက မငြိမ်းပါဘူး။ ဒီဘ၀အဆုးံ သတ်သွားပေမယ့် နောက်ထပ်ဘ၀တစ်ခကုထပ်ရနေဦးမှာပါ။ နောက်ထပ်ဘ၀ ထပ်ရလို့ ခန္ဓာပြန်ရလာရင် ဒီဒကု္ခေ တွကလည်း ထပ်ပြီးဖြစ်နေဦးမှာပါ။ အမှန်ဒက္ခြု ငိမ်း ချင်ရင် ဒီဒကု္ခေ တွ
ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကုယိက်ို ဖြစ်စေတတ်၊ ခန္ဓာအိမက်ို ဖွဲ့တတ်တဲ့ တဏှာဆုတိဲ့ အကြောင်းတရားကုသိတ်မှ အမှနြ် ငိမ်း မှာပါ။ ရရှလိာတဲ့ ခန္ဓာအစုဖြစ်တဲ့ ကုယိက့် ယို က်သို တ်လို့ ဒုကက္ခ မပြတ်ပါဘူး။ ဒီဒကုက္ခို ဖြစ်ပေါ် စေတဲ့ တဏှာဆုတိဲ့ သူက့  သို တ်မှ ဒုကအ္ခ မှန် ပြတ်မှာပါ။
နောင်တကင်းရာသို့… လောကမှာ ရှတိပဲ့ ထုဇင်မနှသ်မျှ နောင်တမရဖူးတဲသူ့ မရှပိါဘူး။ နဲနဲလေး၊ အခုက်ိအတန်ေ့  လးလောက် ဖြစ်ဖြစ် ရဖူးတဲသ့ေူတွချည်းပါပဲ။ နောင်တ အားလုံးရဲ့ တရားခံဟာ လုပသ်င်လု့ပထ်ကို တ်ာကို မလုပမ်ိ
လုကြိ် ခင်းနဲ့ မလုပသ်င့် မလုပထ်ကို တ်ာကို လုပမ်လိကိုြ် ခင်းတုေိ့ ကြာင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ေပြာရရင်
ကုယိက်ယို တ်ငို ရ့်ဲ အလုပ်ေတွကြောင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောင်တဖြစ်အောင် လုပတ်ာလည်း ကုယိပ်ြဲ ဖစ်သလို နောင်တမဖြစ်အောင် လုပတ်ာလည်း ကုပြိဲ ဖစ်ပါတယ်။ လုပသ်င်တ့ာကို မလုပမ်တိဲ့ နောင်တထက် ပုဆိးု တာက မလုပသ်င်မ့လုပထ်ကို တ်ဲ့ အမှားကို ကျူးလွနမ်တိအဲ့ တွက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နောင်တက ပုဆိးု ပါတယ်။ အမှားလုပမ်တိယ်ဆတိုာအမှားအမှနက်ို မခွဲခြားနုငိမ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားအမှန် မခြွဲ ခားနိုငြ် ခင်းဟာ
အငြိုးအတေး အာဃာတတွေနဲ့ စိတဆ်ိးု စိတတ်တို တ်တဲ့ ဒေါသစိတ်ေတွကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသော အတ္ထံ နဇာနာတိလို့ ဆုသိလို ဒေါသဖြစ်ရင် အကြောင်းအကျိုး၊ အကောင်းအဆုိး ကို မသိ၊ အမှားအမှနက်ို
မခွဲခြားတတ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနောင်တဟာ လွနက်ျူးမိပြီးမှ ဖြစ်တတ်ကြတာဆုေိတာ့ ကုယိ့် လုပရ်ပ်အတွက် ပြန်တော့ပေးဆပ်ရပါတယ်။ တကယ်လမိျု့ား ဒီနောင်တတွေရဲ့ အကြောင်းဖြစ်တဲ့ အမှား
ကျူးလွနမ်ကှုို မလုပြ် ဖစ်ခရဲ့ င်၊ အမှားမကျူးလွနခ်င် စိတက်ို ထိန်း နိုငခ်ဲ့မယ်ဆရို င် ဒီလို နောင်တရတဲ့အထိ ဖြစ်လာနုငိစ်ရာ အကြောင်းမရှပိါဘူး။ ဒါကြောင့် နောင်တမဖြစ်ချင်ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှားမကျူးလွနမ်ခိင် ကုယိ့်စတိက်ို ထိန်း ကြဖို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
တုံ့ပြန်မကှုို တြုံ့ ပန်မပြုနဲ…့  လူအမျိုးမျိုးရှတိအဲ့ တွက် တြုံ့ ပန်မှု အမျိုးမျိုးလည်း ရှမှိာပါပဲ။ ကြိုက်တလဲ့ ကူကောင်းတာတွေနဲ့ တြုံ့ ပန်မှာ ဖြစ်ပြီး မကြိုက်တသဲ့ ကူတော့ အဆိုးနဲ့ တြုံ့ ပန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လောကဓံ သဘောပါပဲ။
လောကဓံရစှပ်ါးလုံး ကြုံရတတ်ပေမယ့် အများဆုးံ ကြုံရတာက ကဲရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းဆုတိဲ့ လောကဓံတွေ
ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတငိုး လူတငိုး ချီးမွမ်း ခြင်း ခံဖူး ကြသလို ကဲရဲ့ခြင်းလည်း ခံဖူး ကြပါတယ်။ ခံနေရဦးမှာပါပဲ။ မတူညတီသဲ့ ၊ူ မတူညတီဲ့ စရုကိ်၊ မတူညတီဲ့ အတွေးအခေါ် ရှေိနတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့နေသမျှတော့ ဒီလကို ရ့ဲဲ့ ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းဆုတိဲ့ မတူညတီဲ့ တြုံ့ ပန်မှေုတွက ရှေိနကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါတရား ဓာတ်ခရံတှိဲ့
သူတွေဟာ ကောင်းတဲသ့ဘောတွေနဲ့ တြုံ ပန်နေကြမှာဖြစ်ပြီး သဒ္ဓါတရား မရှသိေူတွကတော့ အဆိုးတွေနဲ့ တြုံ့ ပန်ကြမှာ မလဲပွါဘူး။ ဒါဟာ ရှောင်လမွဲ ရတဲ့ လောကဓံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုးံ ကတော့ ဘယ်လို တြုံ့ ပန်မမျှုိုးပဲလာလာ ခံနငိုရည်ရှေိ အာင် ကြိုးစားလုကြိ် ခင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဘယ်လတိုြုံ့ ပန်မမျှုိုးလာလာ ကုယိ့်စတိက်ို ကုယိမ်ယိမ်း ယိုင်ေအာင်၊ မတုနမ်လှုပ် ခံနငိုေ် အာင် လေကျင့် နေထိုငြ် ခင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ပျက်ပေမယ့် မဖျက်မေိစနဲ့… လောကမှာ ပျက်စီး ခြင်းနဲ့ ဖျက်စီး ခြင်းလို့ နှစမ်ျိုးရှိပါတယ်။ ပျက်စီး ခြင်းဟာ အလိုအလျောက် သဘ၀ အတုငိ်း ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပြီး ဖျက်စီး ခြင်းကတော့ ကုယိက်ယို တ်ိုငန်ဲ့ တစ်စတုံ စ်ယောက်ရဲ့
ပယောဂကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ပယောဂပါလာရင် လုပ်ေဆာင်ချက်ပါလာပြီး
လုပ်ေဆာင်ချက်ရလှိာရင် စေတနာလည်း ရှလိာနုငိပ်ါတယ်။ စေတနာပါတဲ့ အလုပြ် ဖစ်ရင် ကံမြောက် လာနုငြိ် ပီး ကံမြောက်လာရင် တန်ပြန်အကျိုးပေးမှုလည်း ရှလိာနုင်ိပါတယ်။ ပျက်စီး တတ်တဲ့ သဘောဖြစ်တဲ့ အတွက် ပျက်စီး မှုမှာ ဘာမှု ထိခကို မ်ှု မရှနိငိုပေမယ့် ဖျက်စီး မှုကြောင့် ပျက်စီး သွားတဲ့ သဘောဆုရိင်တော့ တန်ပြန်သက်ရောက်မကှို ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာပေမှာ ဗျသနခေါ် ပျက်စီး ခြင်းတရား ငါးပါးရှေိကြာင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီဗျသနတရားငါးပါးထဲမှာ ဉာတိဗျသန (အမျိုးများပျက်စီး ခြင်း)၊ ဘောဂဗျသန
(စည်းစိမဉ်စ္စာများ ပျက်စီး ခြင်း)၊ ရောဂဗျသန (အနာရောဂါကြောင့် ပျက်စီး ခြင်း) တွေကြောင့် သတ္တ၀ါတွေ
ကို အပါယ်ငရဲအထိ် ကျရောက်မကှုို မဖြစ်စေပေမယ့် သီလဗျသန (သီလပျက်စီး ခြင်း)၊ ဒိဋ္ဌဗျိသန (အယူဝါဒ ပျက်စီး ခြင်း) တွေကြောင်က့တော့ အပါယ်ငရဲအထိ ကျရောက်စေနုငိပ်ါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျက်စီး ချိနတ်န်လို့ ပျက်စီး ကြတဲ့ သဘောတရားတွေမှာ တုနလ်ပှုမှု မရှိကြစေဘဲ ဖျက်စီး မှ ပျက်စီး တတ်တဲ့ ပျက်စီး မှုတွေ ကုေိတာ့ အကြောက်တရားနဲ့ မပျက်အောင် ထိန်း ကြဖို့ လုပိါတယ်။
ကံကောင်းလိုသော်… ကံကောင်းချင်တသဲ့ ဟူာ ကုသလို မ်ျားများလုပဖ်ို့ လုပိါတယ်။ ကုသလို လ်ပ်ုခြင်းဟာ အကောင်းလုပြ် ခင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ေကာင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ေကာင်းရင် အကျိုးပေးကောင်းမှာဖြစ်ပြီး
အကျိုးပေးကောင်းခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်သကူမှ လုပ်ေပးလို့ ဖြစ်လာခြင်း မဟုတဘ်ဲ ကုယိက်ယို တ်ိုင် လုပခ်ြဲ့ ခင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကံကောင်းချင်ရင် ဘာဗေဒင် ယတြာမှ မလုဘိဲ ကုသလိုကောင်းမှုပဲ များများဖိလပြု ကဖို့ လုတိယ်လို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတုယတူတ်ဖလို့ …ို . လောကကြီးမှာ နေ့စဉ်ကျင်လည် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ လှုပရ်ှားမှုတွေကပဲ ယူတတ်၊ မြင်တတ်တဲ့ သူတွေ
အတွက် ကောင်းတာတွေ၊ ကုသလိုြ် ဖစ်စရာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေ၊ ရှေိနတယ်ဆတိုာသတိပြုမိကြဖုပိ့ါ။ ဘယ်လေို နရာ၊ ဘယ်လအို ချိန၊် ဘယ်လလို မျူိုးဆီကမဆို ကောင်းတဲ၊့ ကုသလိုြ် ဖစ်စေမယ့် အရာတွေဆို အတုလကိုြ် ပီး ကျင်သ့ုးံ ယူတတ်ဖနိုဲ့ အပြစ်ဖြစ်စေ၊ အကုသလိုြ် ဖစ်စေမယ့် အရာတွေဆို ရှောင်ပယ်နငို
အောင် ကြိုစားကြဖုပိ့ါ။ အမှန်ေတာ့ ဘယ်သကူ့ ပိုြဲ ကညြ့် ကည့်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲ နေနေ ကောင်းတဲဘ့က်က ကြည့တ်တ်မြင်တတ် ယူတတ်ရင် ကုသလိုြ် ဖစ်နေတာပါပဲ။ ကုသလိုဖြစ်အောင် ကြည့တ်တ်၊ ကုသလိုြ် ဖစ် အောင် ယူတတ်ရင် ကုသလိုြ် ဖစ်နေတာပါပဲ။ စာလိုတော့ ယောနိသောမနသိကာရလို့ ဆိုပါတယ်။
ယောနိသောမနသိကာရဆုတိာ နှလုးံ သွင်း မှနက်န်တာကို ဆိုပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အကုသလိုမဖြစ်အောင် နှလုးံ သွင်း တတ်တာကို ဆုပိါတယ်။ အကုသလိုမဖြစ်အောင် နှလုးံ သွင်း ဖုဆိ့ တိုာအကုသလို
မဖြစ်အောင် ကြည့တ်တ်၊ မြင်တတ်မှ ဖြစ်တာပါ။ ဒီလြို ကည့တ်တ်ဖိ့အုတွက် အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှမှိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းဘက်က ကြည့တ်တ်မြင်တတ်ရင် အကုသလို မ်ဖြစ်ဘဲ အပြစ်အဖြစ် သက်သာပါတယ်။ ကောင်းတာကို ကြည့တ်တ်တဲ့အတွက် ကောင်းတာလေးတွေမြင်ပြီး ကောင်းတာတွေ ယူလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ အတုယတူာလို့ ဆုနိငို တ်ာပေါ့။ ကောင်းတဲအ့တုလကိုမပှုါပဲ။
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၆) ကုယိက်ကောင်းမှ သူလည်းကောင်းမယ်… ဘယ်သမူဆို အကောင်းကုပိဲ အလုရိတှိ တ်ကြရာမှာ အကောင်းများဖြစ်စေဖို့် ကုယိက်ယို တ်ိုင် အရင်ဆုးံ
ကောင်းပြဖို့ လုအိပ်ပါတယ်။ ကုယိက်မကောင်းရင် သူတပါးလည်း ကောင်းမှာမဟုတတ်ဲ့အတွက် ကိယု ကုယိတ်ငိုမကောင်းမဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားသင်လ့ပှါတယ်။ အကောင်းအစစ်ဆတိုာမကောင်းမဖြစ်ဖို့ လုအိပ်တဲ့ အတွက် အကြောင်းအပြစ်ကို ကောင်းပြစ်ဖို့် လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းကောင်းရင် အကျိုးကောင်းမှာ
ဖြစ်ပြီး အကျိုးကောင်းခြင်းဟာ အတုံ့အလှည့ေ်ကာင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတုအံ့ လှညေ့် ကာင်းခြင်းဟာ အကောင်းလုပခ်ြဲ့ ခင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိတုအံ့ လှညမ့်ျားရဲ့ တုံ့ပြန်မမျှုားဟာ ကုယိရ့့်ဲ အလုပမ်ျား
ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သမူဆို အတုအံ့ လှညေ့် ကာင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အလုပ် လက်နက် ကောင်းနဲ့ အကြောင်းကောင်းအောင် ကြိုးစားကာ မိမကိအရင် အကောင်းများနဲ့ ကောင်းပြဖို့် လုတိယ် ဆုတိာ သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းအားကုယိစ်…ီလောကမှာ လူတိငုးလူတငိုး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကုယိပ်ိုင်အစွမ်း အစများနဲ့ ကုယိတ်ငို လ်မှ်း ကြွနငို တ်ာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အစွမ်းအစဆုတိာ အစလုပလ်ကို မ်ှ စွမ်း လာတတ်တဲ့ သဘောရှတိယ်ဆတိုာမမေ့ကြဘဲ သူများကို အားကုိး မှခီိုနေတာထက် ကုယိပ်ိုငအ်စွမ်း အစ ကုယိစ်ရှီေိ နကြတဲ့ ကုယိက့် ယို က်ပိုဲအားကိုးမှခြီို ကဖု၊ိ့ အမှီ တစ်ခခုနဲု့ ကုယိပ်ငို အ်စွမ်းကို အားပြုတဲအ့ခါမှာလည်း တစ်ခြားအရာများထက် တရားကုပိဲ အားပြုကြဖို့၊
ကုယိက့် ယို က်ယိုနဲ့ တရားမှတစ်ပါး ကိုးကွယရ်ာ မရှဘိူးဆိတုာ သတိပြုမိကြဖို့ အထူးလုအိပ်လပှါတယ်။ ဘယ်အလုပပ်ြဲ ဖစ်ဖြစ် စမိဖကို့ အရေးကြီးပြီး စပြီးရင် စွမ်း လာမှာဖြစ်လို့ အစနဲ့အစွမ်း ကို အစွမ်း အစဖြစ်ဖို့
ကုယိ့်အားကုယိက်ိးု ရင်း ကုယိအ့် စွမ်း ကုယိ် ပြနုင်ိအောင် ကြိုးစားလုကြိ် ကဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အတုအံ့ လှည့်… သက်ရောက်မတှုငိုး တွင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှတိယ်လို့ ဆုသိလုပိဲ စေတနာပါတဲ့ လုပရ်ပ်တိငုးမှာလည်း တန်ပြန်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် အတုအံ့ လှညဆ့် တိုာရှေိနပါတယ်။ အဲဒအီတုအံ့ လှညဟ့်ာကောင်းတာပဲ
ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆုိး တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပတ်သဲ့ ရူဲ့ စေတနာမှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ လုပတ်သဲ့ ကူအကောင်းပြုလုပရ်င် တန်ပြန်သက်ရောက်မရှဲု့ အတုအံ့ လှညဟ့်ာလည်း ကောင်းမှာဖြစ်ပြီး လုပတ်သဲ့ ကူမကောင်းပြုလုပရ်င်
တန်ပြန်သက်ရောက်မရှဲု့ အတုအံ့ လှညဟ့်ာလည်း မကောင်းဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုယိန်ြဲ့ ဖစ်ဖြစ်၊ နှုတန်ဲ့
ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတန်ြဲ့ ဖစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ေပြာဆိုကြံစမီမျှုားဟာ ကုယိက်ယို တ်ငို ရ့်ဲ ရွေးချယ်မပြှုဲ ဖစ်ပြီး အဲဒအီပြုအမူ အပြောအဆို အကြံအစီများရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မဟှုာလည်း ရွေးချယ်ပြုလုပခ်တဲ့ ကုယိထ့် ပဲံ ပြန်လာ
မယ့် အတုအံ့ လှညမ့်ျား ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုအမူကောင်းရင် အတုအံ့ လှညေ့် ကာင်းမှာဖြစ်ပြီး အပြုအမူဆိုး ရင် အတုအံ့ လှည့် ဆိုးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိခိုးနုိး မလှစနုးနုိး ..
“မရှိခိးု နုိး ၊ မလှစနုး နု”ိ ဆုတိဲ့ မြန်မာစကားပုံ တစ်ခရှုိပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ လောကကြီးမှာ မရှရိင် သူခိုး လို့
အထင်ခရံတတ်၊ မလှရင် စုန်း လို့အထင်ခရံတတ်ပေမယ့် ကိယုက်ယို တ်ငိုကုယိက့် ယို က်ို သူခိုးလို့ အထင် မခံမေိစဖု၊ိ့ သူများကို ဒုက္ခေ ပး ပြုစားတတ်တဲ့ စုန်း လို့ အထင်မခံမေိစဖို့ အဓိကကျပါတယ်။ ဘယ်သကူ
ဘယ်လောက်ပဲ အထင်သေး၊ နှိမခ့်ျနေပါစေ ကုယိက့် ယို တ်ငိုကုယိက့် ယို က်ို ပြန်ပြီး အထင်သေး၊ နှမိခ့်ျမှု မဖြစ်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကုယိက့် ယို က်ို ယြုံ ကည့မ်ရှုိနေဖု၊ိ့ အထင်မသေးမိဖကို့ ကုယိ်
ကုယိတ်ငိုအကျင့သ်လီကောင်းနေမှ ဖြစ်မှာ ပါ။ မွဲေနတဲ့အပြင် အကျင့ပ်ါ မကောင်းဘူးဆုရိင်တော့ သူတပါး က အထင်သေးနှမိ့်ချတာကို ခံရတဲ့အပြင် ကုယိက်ယို တ်ငို လ်ည်း ကိယုက့် ယို က်ယိုလိပြ် ပာမသန့် ဖြစ်တတ်
ပါတယ်။ နောက်ဆုးံ တော့ ရုပပ်ိုင်းဆုင်ိရာ ဘယ်လောက်ပဲ မဲမွဲ ကုယိက့် ယို က်ယိုအကျင်မ့မွဲေအာင် ကြိုးစား ကြဖုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမြင့်ချင်ရင်… ကံနမိက့်ြံ မင်ဆ့တိုာဘ၀မှာ လူတိငုးကြုံတွေ့ရမယ့် လောကဓံသဘော ဖြစ်တ့အဲတွက် ကံနမိေ့် နတဲအ့ခါ စိတဓ်ာတ်မကျဘဲ အကောင်းတွေပဲ ကြိုးစားလုပန်ငို တ်ာဟာ ကံကောင်းချင်တသဲ့ေူ တွရဲ့ တစ်ခတုည်းသော နည်းလမ်းဆုတိာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမြင်န့ငို မ်ယ့် လုပရ်ပ်တွေဖြစ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ ဒုစရုကိအ်မှု တွေကို ရှောင်ပြီး ကောင်းတဲသ့စုရုကိေ်တွနဲ့ နေထိုငန်ငိုေ် အာင် ကြိုးစားခြင်းဟာ နိမက့်ျတာတွေကို တစ်ခါ ပြန်ဆယ်နငို တ်ဲ့ ဘယ်သက့ူ မှိုမထိခကို တ်ဲ့ ကျင့်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုိး တွေကြုံလေလေ သီလကို
အထူးလုေံအာင် ထိန်း လေလေ၊ မကောင်းတဲ့ တုကိခ်ကို မ်ှေုတွနဲ့ များများ တုက်ိခကို ခ်ံရလေ ကုယိ့်စတိက်ို မယိမ်း ယုင်ိအောင် သမထအလုပ် ၀ိပဿနာ အလုပ်ေတွနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်ေလ ဆုရိင်တော့ ဘယ်လို နိမက့်ျမှုမျိုးမဆို ခံနငိုရည်ရြှိ ပီး အမြင်ကို့ တစ်ခါပြန်တက်နငိုမယ်ဆတိုာသေချာလှပါတယ်။
အကြောင်းကောင်းမှ အကျိုးကောင်း... တကယ်တော့ လောကမှာ အကောင်းအဆုိး ဆုတိာ တစ်ခြားသူက လုပ်ေပးလို့ ရတာမဟုတပ်ါဘူး။ ကုယိ် ကုယိတ်ငို ပ်ဲ လုပရ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုယိေ်ကာင်းချင်ရင် ကုယိေ်ကာင်းပြင်ဖို့ လိုအပ်သလို ကုယိမ်ကောင်း
ချင်ရင်လည်း ကုယိမ်ပြောင်းဘဲ နေလို့ရပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး အနိမ့အ်မြင်ဆ့တိုာအကြောင်းအကျိုးရဲ့ နိယာမတစ်ခု ဖြစ်တအဲ့ တွက် အကျိုးကောင်းအောင် အကြောင်းကောင်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆုတိာ ကမ္မဖလဖြစ်ပြီး ကံရဲ့ ရလာဘ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံဆတိုာလုပ်ေဆာင်ချက် ဖြစ်တအဲ့ တွက် လုပ်ေဆာင်ချက်
ကောင်းရင် အကျိုးရလာဘ်ကောင်းမှာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ေဆာင်ချက်ဆိးု ရင် အကျိုးရလာဘ် ဆုိး မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆုိး တာဟာ ကံနမိတ့်ာဖြစ်ပြီး အကျိုးကောင်းတာဟာ ကံမြင်တ့ာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံနမိေ့် နရင်
အကြောင်းဖြစ်တဲ့ လုပ်ေဆာင်ချက်ကောင်းနဲပ့ဲမြှငရ့် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ခတုည်းသော ကံမြှငရ့်ာနည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမွဲပေမယ့် အကျင်မ့ပဲပွါစေနဲ့… မဲရွင်လရူာမ၀င်ဖြစ်ပြီး အနှမိခ်ရံတဲ့အတွက် စိတဓ်ာတ်ကျသူတွေ ရှတိတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကုယိက့်ံအကျိုးပေး မကောင်းလို့ မဲလွာခဲရ့တဲ့ အဖြစ်မှာ ဒီလမို တွဲ့အတွက် ထင်ခရံတဲ့ အပြစ်တွေ လုက်ိတွေး၊
လုက်ိခစာံးနေလုကိ့ တော့ ပြီးမှာမဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။ မဲလြွို့ ဖစ်ရတဲ့ ဆုိး ကျိုးဟာ အတိတက်ကုယိလ်ပုခ်တဲ့ ကံရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မလှုို့ သဘောထားပြီး လက်ရမှိွေဲ နတဲ့ ဘ၀ကနေ နောင်ကျင်လည်ရမယ့်
ဘ၀တွေအထိ ဒီသက်ရောက်မှေုတွ ပါမသွားအောင်ပဲ ကြိုးစားရတော့မှာ ပါ။ လူမွဲပေမယ့် စိတမ်မွဲေအာင်၊
လူမွေဲ ပမယ့် စေတနာ မမွဲေအာင်၊ လူမွေဲ ပမယ့် သဒ္ဓါမမွဲေအာင်၊ လူမွဲပေမယ့် အကျင်မ့မွဲေအာင်ပဲ အတတ် နုငိဆ်ုံး ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သေူတွ ဘယ်လထို င်ထင် ကုယိရ်ဲ့အသွင်ေတွ မမဲဖွပိုဲ့ကြိုးစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့မ်ရွဲ င် အသွငမ်ွဲတတ်တအဲ့ တွက် အသွင်မမွဲအောင် အကျင်မ့မဲဖွို့ သတိပြုရမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ မဲလွို့ အထင်သေးခံ၊ အနှမ်ိခေံနရတဲ့ ဘ၀မှာ အကျင့ေ်ကာင်းအောင် ကြိုးစားပြီး သူတို့ မလုပ် နုငိတ်ဲ့ အကျင့ေ်လးတွေနပဲ့အနုငိယ်နူငိုေ် အာင် အားထုတရ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူဖြစ်စေ…ရဟန်းဖြစ်စေ… အမှန်ေတာ့ လူပြဲ ဖစ်ဖြစ် ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘ၀မှာပဲ ရှိရှိ ကုသလိုကောင်းမှုဆတိုာကြိုးစားအားထုတ် နုငိသ်ူတွေ အတွကပ်ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဟန်းဖြစ်နေပေမယ့် ကုသလိုေ် ကာင်းမှု မလုပရ်င် ရဟန်းဘ၀ဟာ ကုသလို မ်ရနုငိတ်ဲ့ ဘ၀ဖြစ်ပြီး လူဖြစ်နေပေမယ့် မကောင်းမှုကေို ရှာင်ပြီး ကောင်းမှုကို ဆောင်ထားရင်
လူဘ့  ၀ဟာ ကုသလိုရနုငိတ်ဲ့ ဘ၀ဖြစ်ပါတယ်။ လူဖြစ်ဖြစ် ရဟန်းဖြစ်ဖြစ် ရရှထိားတဲ့ ဘ၀ကို တန်ဘိုး ရှိ
အောင် အသုံးချရင်း ရရှထိားတဲ့ အနေအထားများနဲ့ ရနုငိသ်မျှ ကုသလို တ်ရားများ ကြိုးစားပွားများနုင်ိရင် အဲဒဘီဝဟာ အမြတ်ဆုးံ ဘ၀၊ အကောင်းဆုးံ ဘ၀၊ ကုသလို အ်ရဆုံး ဘ၀ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရဟန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရရှထိားတဲဘ့ဝမှာ ကုသလိုရအောင် ကြိုးစားကြဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကုယိက့် ကံယိုမြှင့် စိတမ်ညစ်နဲ့… ကံမကောင်း အကြောင်းမလှလို့ မကောင်းတွေကျနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ကံတစ်ခါကောင်းလို့ အကြောင်း လှပြီး အကောင်းရရလေအောင် ကုယိက့် ကံယို စ်စ်ကာ ကောင်းတာတွေနဲ့ နှစန်ိုင်ေအာင် ကြိုးစားကြဖို့
လုပိါတယ်။ ကံနမိ့်နေလုလိ့ ဆို ကိုာစိတည်စ်ညစ်နဲ့ အဆိပြ် ဖစ်စေမယ့် မကောင်းတဲ့အလုပ်ေတွကို မလုပမ်ိ ကြဘဲ အဆုိး များအတွက် အတုိး ပွားပြီး အကျိုးများစေမယ့် ကောင်းတဲ့အလုပ်ေတွကပိုဲကြိုးစားလုပ်ေနကြဖို့ လုပိါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အချိနဆ်တိုာရှတိဲ့အတွက် အချိနတ်န်ရင် အဆုိး တွေပျောက်ပြီး အကောင်း ရောက်လာမှာကို သဘောပေါက် ဆင်ခြင်ကာ အခုကိအ်တန့် ကံနမိေ့် နတဲ့ ကာလလေးမှာ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ေတွနဲ့ စိတမ်ညစ်ဘဲ ကောင်းတဲအ့လုပ်ေတွနသဲ့ာကုယိက့် ကံယိုြ် မှငြ့် ကဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အရှင၀်ိစတ္တိ (မနာပဒါယီ)
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၇) ခွငလ့်ွတ်ေစချင်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခွငလ့် တြွ် ကည့ေ်စချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လလို့ ဆဲေို တာ့ ခွင့်မလွတန်ိုငဘ်ဲ ရန်ငြိုးဖွဲ့ကြရာမှ
ဖြစ်ပေါ်ခဲတဲ့ အပြန်အလှန် အငြိုးအတေး အာဃာတ၊ ကလဲစ့ားချေမှုတွေဟာ သံသရာကို ရှညြ် ကာစေပြီး လွတ်ေမြာက်ရာအမှန် နိဗ္ဗာ န်နဲ့ ဝေးနေတတ်လပိဲု့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂုိ လ်တစ်ဦး ချင်းရဲ့ ကုယ်ိပငိုလွတလ်ပ်ခငွ့် အရ ခွငမ့် လွတဘ်ဲ နေလုရိ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွငမ့် လွတဘ်ဲ နေခြင်းရဲ့ နောက်ကယွမ်ှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်
ရလာဘ်တွေအတွက်ေတာ့ ကုယိက်ယို တ်ိုငပ်ဲ ပြန်ခရံမှာဖြစ်ပါတယ်။ သံသရာအဆုံးသတ်ဖို့ ကုယိလ်ုပတ်ဲ့
ကောင်းကံ၊ မကောင်းကံတွေကို အဆုးံ သတ်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အငြိုးအတေးတွေနဲ့ လုပ်ေနကြတဲ့ လုပရ်ပ်တွေကို ခွငလ့် တွသ်ီး ခံမှုနဲ့ အဆုးံ သတ်မပှဲ ပြီးဆုံးကြမှာပါ။ ကံတွေကို ဉာဏ်နြဲ့ ဖတ်မပှဲ သံသရာလည်မကှုရပ်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလမှိုမဟုတဘ်ဲ ခံလကို ရ်လို့ မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ခွငမ့် လွတ်နငို ဘ်ူးဆြုိ ပီး အငြိုးအတေး
တွေထားကာ ပြန်လည်တံြု့ ပန်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ ကုယိ့်အတွကလ်ည်း အတုအံ့ လှည့် ပြန်ဖြစ်ကာ သံသရာ အဆက် ရှညြ် ကာလျက်ပဲ နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အူမ,တောင့်ရေး ဦးစားမပေးသင်…့“အူမ,တောင့မ်ှ သီလစောင့်”ဆုတိဲ့ စကားပုကုိံ အကြောင်းပြပြီး အူမ,တောင့ေ်ရး ဦးစားပေးနေသူတွေ ရှပိါတယ်။ ဘုရားရှငက်တော့ “သီလမလြုံ ခုံဘဲ နှစ်ေပါင်းတစ်ရာကျော် အသက်ရငြှ် ပီး နေရတာထက်
သီလလြုံ ခုံပြီး တစ်နေ့တစ်ရက် တစ်မနက်မျှ အသက်ရငှ၍်နေရတာက ပြုိ မတ်ကြောင်း…” မိနေ့် တ်ာမူ ပါတယ်။ ဘုရားရှငအ်လိုအရ အူမ,တောင်အေ့ာင် ကြိုးစားရင်း အူမ, တောင်လ့ာတဲအ့တွက် အသက်တွေ
ရာထောင်မက ရှည်ေနပေမယ့် သီလမလြုံ ခုံရင် အဲဒီပဂ္ဂုိ လ်ရဲ့ အသက်ရင်ှနေမှုဟာ အနှစမ်ရှတိဲ့ အသက်ရငှ် နေမှုပဲ ဖြစ်ပြီး အူမ,မတောင်လို့ အသက်မရှည်ေပမယ့် သီလလြုံ ခုံပြီး နေသွားရမယ်ဆရို င် အဲဒီနေရတဲ့ အခိကုဟ်ာ အနှစရ်တှိဲ့အခုကိ်၊ တန်ဘိးု ရှတိအဲ့ ခုကိလ်ို့ နားလည်သဘော ပေါက်နငိုပါတယ်။
အကျင့သ်လီလုံခြုံရေးဟာ အဓိကဖြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးဟာ တဒင်္ဂအခုက်ိအတန်မ့ျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီလနဲယ့  ဥှလ်ာရင် အသက်ပင် စွနလ့် တွတ်ဲ့အထိ ထိန်း သိမ်း သင်ပ့ါတယ်။ သေချာတွေးကြည့ရ်င် သံသရာ အဆက်ဆက်၊ ငတ်ခတဲ့ာတွေ များခဲသ့လို အကြိမြ် ကိမ် သေခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲပ့ါပြီ။ အူမ,မတောင်လို့
သေမယ်ဆိရုင်လည်း အကြိမြ် ကိမ် သေခဲဖူ့းပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ဘ၀ ထပ်သေလည်း မထူးပါဘူး လုေိ့ တာင် ဆုနိုငပ်ါတယ်။ သီလမလုဘဲံ သီလသေရင်တော့ အူမ,မတောင်လို့ ဒီဘ၀မှာ သေရတာထက်
အဆပေါင်းမြောက်များစွာ မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ ပုလို့တောင် အူမ,မတောင့် ဖြစ်နငိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သီလကို ဦးစားပေးကြဖို့ ဆုးံ မတော်မြူ ခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ရှ့ကစ်ရာ… လောကမှာ အရှကလ်ွေဲ နတဲသ့ေူတွ တော်တော်များပါတယ်။ ရှကစ်ရာ မဟုတတ်အဲ့ ရာတွေမှာ ရှက်ေနပြီး ရှကရ်မယ်အ့ရာတွေကျတော့ မရှကဘ်ဲ ဖြစ်နေတတ်တာတွေ အများကြီး ရှပိါတယ်။ လောကီနယ်ပယ်မှာ ရှေိနကြတဲ့ ရုပပ်ငိုးဆုငိရ်ာ ပြည့စ်ုံမှု၊ မပြည့စ်မုံ ၊ှု ပညာတတ်မှု၊ မတတ်မ၊ှု ဂုဏ်ရမှိုမရှမှိေုတွဟာ တကယ် တော့ ရှကစ်ရာတွေ မဟုတဘ်ဲ ကုယိက်ျင့တ်ရားတွေ ပျက်စီးတာ၊ လောက၀တ်တွေ ဖောက်ပျက်တာ၊
ဓမ္မ၀တ်တွေ ချွတယ်ငွ်းတာ စတာတွေကသာ တကယ်ရ့က်ှစရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ရှကစ်ရာ ကောင်း တာက ကုယိအ်မှားလုပမ်တိာကို မသိဘဲ အမှားကို အမှနလ်ို့ ထင်ပြီး ဘယ်သဘူာပြောပြော ကုယိက်အမှန် ဆုတိဲ့ တစ်ယသူန် အစဲနွဲ့ ဇွတအ်တင်း မဟုတတ်ာကို ကုငိစ်ထွဲားတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှကတ်တ်မယ်ဆိရုင် ကုယိက့် ယို က်ို ပြန်ပြီး ရှကသ်င်ပ့ါတယ်။ ကုယိလ်ပုတ်ာ ကုယ်ိအသိဆံုး ဖြစ်တအဲ့ တွက် ကုယ်ိမကောင်းတာ လုပတ်ဲ့အခါလည်း ဘယ်သမှူ မသိဘူး ဆိုပေမယ့် သေချာတွေးကြည့်ရင် ကုယိ် ကိယုတ်ငို က်သိနေတာဖြစ်လို့ ကုယိက့် ယို က်ို ပြန်ရကှေ်နရမယ့် အဖြစ်ပါ။
မန်းတောင်ရပိခ်.ို . “အသက်လေးရယ် ရှည်ေစလို မန်းတောင်ရပိက်ခို ”ို ဆုတိဲ့ စကားကို နားလည်မအှုမှားနဲ့ အသက်ရည်ှချင် ရင် မန္တလေးတောင်ရိပက်ို သွားရောက်ပြီး ခုခိငိုးတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမှာ ပြောတဲ့ မန်းတောင်ရပိဆ်တိုာမန္တလေးတောင်ရဲ့ အရိပက်ို ဆုလိတိုာမဟုတပ်ါဘူး။ မန်းဆုတိဲ့ ငါးပါးသီလ၊
တောင်းဆုတိဲ့ သူတော်ကောင်းတရား ခုနစှပ်ါးနဲ့ ရိပဆ်တိုဲ့ သတိပဋ္ဌာန်တရား လေးပါးတွေကို ဆုလိတိုာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားတွေကို လုကိန်ာကျင့သ်ုးံ ပြီး ဒီတရားအရိပမ်ှာ ခိလုေုံ စတာကို ပြောတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ နေနေ၊ ဘယ်လိအုခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီမန်းတောင်ရိပဆ်တိုဲ့ တရား
တွေနသဲ့ာနေနုငိမ်ယ်ဆရို င်တော့ တကယ်ကို့ အသက်ရညြှ် ပီး အခက်ဝေကာ ရမ္မက်ေပြမယ့် မန်းတောင်ရပိ် ကြီးမှာ နေနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်ခ့ရို မယ့် မန်းတောင်ရပိေ်တွဖြစ်တဲ့ သီလ တရား၊
သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကသိုာခုနိုင်ေအာင် ကြိုးစားကြပါလို့ ဆြုိ ခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှကတ်တ်မယ်ဆရို င်… အရက်မသောက်တဲ့ သူတွေက အရက်သောက်တာ တစ်ခေုလာက်ကိပဲု ရှကစ်ရာလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရှကတ်တ်မယ်ဆိရုင် အရက်သောက်တာမှ မဟုတပ်ါဘူး။ မကောင်းမှုမနှသ်မျှ ရှကရ်မယ့် အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့များအသက်သတ်တာ၊ သူများပစ္စည်း ခိုးတာ၊ သူများသားမယား ပြစ်မှားတာ၊ အိမ်ေထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာ၊ လိမည်ာပြောဆုတိာ စတာတွေဟာလည်း ရှကရ်မယ့် အရာတွေပါပဲ။
ဒါတင်ပလဲားဆိုတော့ မဟုတ်ေသးပါဘူး။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အဆင်မပြေဖြစ်အောင် ဂုးံ တုကိတ်ာ၊ ယုတမ်ာ ရုငိ်း စိုင်း ပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားကုေိပြာဆုတိာ၊ သူအ့  တွကလ်ည်း အကျိုးမရှိ ကုယိအ့် တွကလ်ည်း အကျိုး မရှတိဲ့ စကားမျိုးကို ပြောဆုတိာ စတာတွေကလည်း ရှကစ်ရာတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတပါးအပေါ် အဘိဇ္ဈာ
ပွားတာ၊ သူတပါးစည်းစိမ် ဥစ္စာ ပျက်စီး ရာ ပျက်စီး ကြောင်း ကြံစည်တာ၊ အယူဝါဒ လဲမွှားတာတွေဟာလည်း ရှကစ်ရာတွေထမှဲာ ပါနေပါတယ်။ ဒီလို မကောင်းတဲ့ အလုပ်ေတွနဲ့ ပျော်မွေ့နေတာတွေကမှ တကယ့် ရှကစ်ရာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ကုယိတ်ကယ် ရှကရ်မယ့် အရာတွေမှာ မရှကဘ်ဲ မရှကရ်မယ့် အရာတွေမှာ ရှက်ေနတတ်တဲ့ အရှကလ်ွေဲ နသူတွေ အနေနဲ့ လွဲနေတာတွေကို အချိနမ်ီ အသိဝင်ကာ ရှကသ်င်တ့ာတွေကို ရှကြ် ပီး ရှောင်ရှားနိုင်ေအာင် ကြိုးစားဖို့ လုတိယ်လို့ ဆြုိ ခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရေလိုကလ်ွဲေနခြင်း… အရက်ဆတိုာသောက်ခါစကတော့ ကုယိက်သူက့ေို သာက်တာပါပဲ။ နောက်တော့ သူက ကုယိက့်ို ပြန်သောက်လာပါတယ်။ သူက့ို မသောက်ရရင် မနေနုငိေ်အာင်ကို သူက ချည်နှောင်လာပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ချည်နှောင်လာလဲဆရို င် ဘာမှမသိတဲ့ အထိကို ချည်နှောင်လာတာပါ။ အရက်က ကုယိက့်ို သောက်နေတာကို သောက်မနှ်းမသိတော့ တစ်လဆွဲ ပံင်ကောင်းပြီး အကောင်းကို မကောင်းထင်၊ မကောင်းကို အကောင်းထင်ကာ ရေလုကိလ်ွဲကနုတ်ာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သောက်မှ လူရာဝင်တယ်၊
မိတ်ေဆွအပေါင်းအသင်း ပေါတယ်၊ ခေတ်မတှီ ယ်ဆတိုဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အလုကိလ်ွဲနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လအွဲ တွေးတွေနဲ့ ကုယိက့် ယို က်ို “သောက်သောက်စားစား၊ လူ့မင်းသား”လို့ ထင်နေကြတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ပုကိဆ်ရံတှိ နုး ၊ အလုပရ်တှိ နုး ၊ သန်တနုး မြန်တနုး ၊ မသေခင်တနုး တော့ လူမ့  င်းသားလို့ ထင်ချင် ထင်ကြမှာပေ့ါ။ အဲ… ပုကိဆ်လံည်းမရှိ၊ အလုပလ်ည်းမရှ၊ိ ကုသလို လ်ည်းမရှ၊ိ သီလလည်း မရှရိင်တော့ ကုယိ့်စကားနဲက့ို လူင့  နွားပြန်ဖြစ်တတ်တယ် ဆုတိာတော့ သတိပြုကြဖို့ လုပိါတယ်။
အစမလုပမ်ပိါစေနဲ့… မကောင်းတဲ့အလုပဆ်တိုာလုပပ်ါများရင် အဲဒမီကောင်းမှုကို မကောင်းမှုလို့ မမြင်တော့ဘဲ နေ့စဉ်ပံမုနှ် လုပ်ေနကျ အလုပတ်စ်ခလုထို င်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်ေနမိတတ်ပါတယ်။ အသေးအဖွဲ မကောင်းမှုလေး
ဆုေိပမယ့် လုပပ်ါများရင် ကြီးလာတတ်ပါတယ်။ လုပ်ေနကျ ဖြစ်သွားရင်လည်း အကုသလို လ်ို့ မထင်တတ် ပြန်ပါဘူး။ ငါးတွေခတုထ်စ်ပြီး ရောင်းနေတဲ့ ငါးစိမ်း သယ်တွေလေို့ ပါ့။ ငါးအရှင်ေတွကို သတ်ပြီး ခုတထ်စ်ပါ
များလာတော့ အကုသလို လ်ို့ မမြင်တော့ဘဲ နေ့စဉ်အလုပတ်စ်ခလုို ထင်ပြီး သီးချင်းလေးတစ်အေးအေးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်ေနမိတော့တာပါ။ ဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့အလုပဆ်တိုာအသေးအဖွဲေလးက စပြီး အစမလုပမ်ဖို့ လုတိယ်လို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်သတ်ချင်ရင်… လောကကြီးမှာ ကုယိက့် ယို က်ို ပြန်သတ်လေ့ရြှိ ကတဲ့ သူတွေရပှိါတယ်။ ဒါဟာ လဲမွှားတဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါ တယ်။ တကယ်သတ်သင်တဲ့ ကုယိတ်ငွ်း ကိလေသာတွေကို မသတ်ဘဲ ရုပတ်ရားဖြစ်တဲ့ ဒီခန္ဓာကုယြိ် ကီးကို သတ်နေလုကိ့ တော့ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ မျက်ပင်တွေလို သတ်လေရှင်ေလ၊ ဖြတ်လေတက်လေပဲ ဖြစ်နေ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှနတ်ကယ် ဒုက္ခေ တွကို ငြီးငွေ့လို့ ဒုက္ခြ ငိမ်း ရာ ရောက်အောင် သတ်ချင်တယ် ဆုရိင်
တော့ ခန္ဓာကုယိ် ရုပတ်ရားတွေကို သတ်နေလို့ မရပါဘူး။ ကုယိရ့်ဲ့ကုယိတ်ငွ်း မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟစတဲ့ ကိလေသာတရားများကို သတ်မတှကယ့် ဒုက္ခြ ငိမ်း မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်ပငိုး ရုပတ်ရားတွေကို သတ်ဖလို့ ယွေ်ပမယ့် အတွင်း ကိလေသာ တရားများကုေိတာ့ သတ်ဖခို့ က်လပှါ တယ်။ ဒီအတွင်း ကိလေသာတွေကို သတ်ဖိ့အုတွကက်တော့ ဉာဏ်လက်နက်တစ်ခနုပဲ့သတ်နငို ပ်ါလိမ့်
မယ်။ ၀ိပဿနာအားထုတလ်ို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဉာဏ်လက်နက် တစ်ခတုည်းနဲ့ပဲ ဒီအတွင်း ကိလေသာတွေ ကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်း သတ်ဖြတ်နိငုမ်ှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုယိက့် ယို က်ို ပြန်သတ်ကြရာမှာ ကုယိရ့်ဲ့ ရုပတ်ရားကို ပြန်သတ်ဖို့ မဟုတဘ်ဲ အတွင်းမှာရှတိဲ့ ကိလေသာတရားတွေကို သတ်ရမှာလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါနလေးနဲေ့  တာ့… မြန်မာဗုဒဘ္ဓာသာ အများစုဟာ ဒါနလုပရ်တာကို သဘောကျ ကျေနပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက် အထိ ကျေနပ်ကြသလဲဆရို င် ဒါနလုပ်ေနရရင် အားလုးံ ပြီးပြည်စြုံ့ ပီလို့ ဆြုိ ကတဲ့အထိ ကျေနပ်တတ်ကြပါ တယ်။ အဲဒါကောင်းတာပေါ့။ ဘာပြောစရာရှလိလို့ ဆဲေို တာ့ ဒါနလုပတ်ာ မကောင်းဘူးလို့ ဆုတိာ
မဟုတပ်ါဘူး။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကကျတဲ့ သီလ၊ ကုသလိုနဲ့ ဘာဝနာကုသလိုေ် တွကို ပိုပြီး
ကြိုးစားအားထုတသ်င်တ့ယ်လို့ ဆုလိချိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနတွေ ဘယ်လောက်ပလဲပုလ်ပု သီလမလြုံ ခုံ ရင် မကောင်းတဲဘ့ေုံ တွမှာ ပြန်ဖြစ်နငို သ်လု၊ိ ဘာဝနာ မပါပြန်ရင်လည်း လွတ်ေမြာက်မနှဲု့ အလှမ်း ဝေးနေ
ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဓိကကျတဲ့ သီလကို လုေံအာင်ထနိ်းပြီး ဒါနလေးနဲရ့  ကာံ ဘာဝနာပါတွဲလကိုြ် ကဖို့ အထူးသတိပေး တုကိတ်နွ်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုမှံ ဒါနအကျိုးပေး ကောင်းနိုငသ်လို သီလလုံမှ
လည်း ဘာဝနာဉာဏ် အဖြစ်မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါနလုပတ်ာ ကောင်းပေမယ့် ဒါနတစ်ခတုည်းတော့ မကောင်းနုငိဘ်ူးလို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။ သီလ၊ ဘာဝနာပါတြွဲ ကဖို့ အသိပေးလုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနသီလဘာဝနာ စံပုါလေမှ.. သီလလုရံင် အပါယ်လြုံ ပီး ဒါနပါရင် ချမ်းသာလာကာ ဘာဝနာပွားရင် တဏှာပါးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သီလကို အခြေခံတဲ့ ဒါန၊ ဘာဝနာတွေကို အစုံပါအောင် လုပန်ိုင်ေအာင် ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ ဒီလို ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ စုပါံလေမှ ကြုံလာလေသမျှ ဒုက္ခေ တွက အမှနမ်သွေ အကုနခ်ွာ လေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှင၀်ိစတ္တိ (မနာပဒါယီ)
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၈) လက်သည်ချည်းပဲ အားကိုး၍ မဖြစ်… “လက်သည်ချည်းပဲ အားကုိး မနေနဲ၊့ ကုယိက်ယို တ်ငို လ်ည်း ညှစြ် ကဦး”ဆုတိဲ့ မြန်မာစကားရှိပါတယ်။ တုက်ိရကို အ်ဓိပ္ပါ ယ်ကတော့ မီးဖွားတဲ့ ကုယိဝ်န်ဆောင်မိခင်ကို ရည်ညနွ်း တာ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဘက်မှာ လည်း ကုယိ့်အစွမ်း အစနဲ့ အားထုတမ်ကှုို မပြုလုပဘ်ဲ သူများကုချိည်း အားကိုးလေ့ ရှသိူတွေအတွက် ဥပမာပေး ပြောဆုေိလ့ရတှိဲ့ စကားပုေံလး ဖြစ်ပါတယ်။ အားကုိး လို့ ရမှန်း သိရင် အားကိုးတတ်ကြတဲ့
သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သဘာဝအရ အားကုိး စရာကုရှိားရင်း အားကုိး များပြီး ကုယိက်ယို တ်ငိုအားထုတမ်ှု နည်းပါး လာတတ်တဲ့အတွက် ကုယိ့်အားကုယိက်ိးု စေရန် ရည်ရယွက်ာ ဒီစကားပုကုိံ အသုံးပြုပြောဆို တုကိတ်နွ်း
ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလိတိုာက လောကမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားကိုးရာဆုတိာ ရှိရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အားကုိး လွန်း ရင်လည်း ကုယိမ့်ှာ ဘာမှ မဖြစ်ပဲ ရှတိတ်တ့အဲတွက် သူများကုလိည်း အားကုိး ၊ ကုယိ် ကုယိတ်ငို လ်ည်း အားထုတြ် ကဖို့ ဆုလိရို င်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူများချည်းပဲ အားကုိး နေလို့ မဖြစ်သလို၊ နည်းပြ လမ်းညွှန်ေပးနိုင် မယ့် အားကုစိရာ လက်သည်မရြှိ ပန်ရင်လည်း မဖြစ်တအဲ့ တွက် လက်သည်ရဲ့ အကူအညီ ကို ရယူရင်း
ကုယိက်ယို တ်ငို ရ့်ဲ ညှစယ်မူနှဲု့ လုချိင်တာကို ရအောင်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိစေလုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်သည်ချည်းပဲ အားကုိး နေလို့ မဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ကုယိက်ယို တ်ငို လ်ည်း ညှစဖ်လိုို့ကြောင်း နားလည်စေလုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အားကိုးမလဲပွါစေနဲ့… ဒီနေ့ခေတ်မှာ သားသမီးဇနီးမယား၊ စည်းစိမဉ်စ္စာ၊ ရာထူးဌာနန္တရတွေကို အားကုိး နေကြသူတွေ အများကြီး ရှပိါတယ်။ သေချာတွေးကြည်လ့ကို ရ်င် ကုယိက်အားကိုးရပါတယ်ဆတိုဲ့ သားသမီး ဇနီးမယား၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာများဟာ တဒင်္ဂ အခုကိအ်တန်ေ့  လာက်ပဲ အားကုိး လို့ရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စုပ္ပနဘ်ဝ မသေခင် ခဏလေးလောက်ပဲ အားကိုးလို့ ရနုငိမ်ှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ မသေချာပါဘူး။
ကုယ်ိအားကုိး ရတယ်ဆတိဲု့ သားသမီး စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကုယိ့်အရင်တောင်မှ ပျက်စီး သွားတတ်ကြတာတွေ ရှတိတ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှ မမြဲတအဲ့ တွက်ေကြာင်လ့ည်း ဘာမှပံေုသ တွကလ်ို့
မရဘဲ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ေတာ့ အားကိုးချင်ရင် သားသမီးစည်းစိမ် ဥစ္စာတွေ အားကုိး နေကြတာ ထက် ကုယိလ်ပုတ်ဲ့ ကုသလိုေ် တွကပိုဲအားကိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မသေခင် ကုယိလ်ပ်ုခတဲ့ ကုယိ့်ရဲ့ ကံတွေ ကသာ ကုယိရ့့်ဲ အရိပသ်ဖွယ် ကုယိ့်နောက်ကို လုကိေ်နမှာ ဖြစ်ပြီး သေပြီးနောက်မှာ လည်း ကုယိန်အဲ့ တူ
တစ်ခါတည်းပါသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားကုိး ရာ အမှနြ် ဖစ်တဲ့ ကုသလိုေ် တွကပိုဲတတ်နငို သ်မျှ ယူဆောင်ကြဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ဆတိုာ… လူတစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ကြားမှာ နားလည်မကှုအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ နားလည်မမှုရှရိင်၊ နားလည်မှု မပေး နုငိရ်င် တစ်ဦး နဲတ့  စ်ဦး အကြာကြီး ဆက်ဆလိုံ့ မရကြပါဘူး။ အချစ်ဆတိုာနားလည်ခြင်းပဲလို့ ဆုတိအဲ့ တိုင်း နားလည်မှု မရှရိင် ချစ်လလို့ ည်း မရပါဘူး။ အချစ်မရှိရင် အပြစ်ပဲ ကြည့တ်တ်ပါတယ်။ အပြစ်ကြညြ့် ပီ ဆုရိင်တော့ နားလည်မလှုည်း ပေးလုမိ့ ရ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ
အချစ်ကြီးတယ်ပဲ ပြောပြော နားလည်မှု လဲလွာပြီဆရို င် အချစ်တွေလည်း လျော့လာတတ်ပါတယ်။
နားလည် ပေးခြင်းဟာ ချစ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်တအဲ့ တွက် အချစ်ရညှခ်ျင်ရင် နားလည်မလှုည်း ရှည်ေအာင်
ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ နားလည်မှု ရှညဖ်အို့ တွက် နားလည်မှု ပေးဖုလို့ပါတယ်။ နားလည်မရှုအောင် လုပယ်ဖူို့ လုပိါတယ်။
အစာမကြေ ဖြစ်ကြတဲခ့ါ… တကယ်တော့ ဘယ်သမူဆို တစ်နည်းမဟုတတ်စ်နည်း အမှားလေးတွေ လုပမ်တိတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စေတနာမပါဘဲ ရုတတ်ရက်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အလွဲအချော်လေးတွေ၊ အပြောမှား၊
အလုပမ်ှားလေးတွေ ရှတိတ်ပါတယ်။ အဲဒလီို ရှလိာတဲအ့ခါ သူသကူယို က်ယိုကုယ်ိချင်စာတရားနဲ့ နားလည်ပေးနုင်ိအောင် ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ အကယ်၍ သူေ့  နရာမှာ ကုယိဆ်ိုရင်လည်း ဒီလြို ဖစ်မမှိာ ပဲလို့ သူေ့  နရာကနေ အစားထုိး တွေးကြည့သ်င့ပ်ါတယ်။ သူမှားသလို ကုယိလ်ည်းမှားဖူးတတ်တာ လေးတွေကို သတိရပြီး ခွငလ့် တွှန်ငိုေ် အာင် ကြိုးစားသင့ပ်ါတယ်။ နားလည်မှေုပးနုင်ိအောင် အားထုတသ်င်ပ့ါတယ်။
အဲလမို မှဟုတဘ်ဲ မှားတတ်တဲ့အပေါ်မှာ အပြစ်တွေပဲ မြင်နေမယ်ဆရို င်တော့ ကြာရင် တစ်ဦး နဲတ့  စ်ဦး ကြား အစာမကြေမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကုယိက်အစာမကြေဖြစ်လာရင် တစ်ဘက်ကလည်း ပြန်ဖြစ်
တတ်ပါတယ်။ ဒီလိနဲု့ နှစဉ်ီး နှစဘ်က်လံုး အစာမကြေတာတွေများပြီး နောက်ဆုးံ မှာ မခေါ်မပြောနုငိ၊် မမြင် မကြည်န့ငို တ်ဲ့အထိ ဖြစ်လာကာ အမုန်း ကြီးမုန်းတဲအ့ထိ ဖြစ်ကနုတ်တ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အသေးအဖွဲ့ နားလည်မှု လဲတွာလေးက စခဲတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာမကြေ ဖြစ်ကြရခြင်းရဲ့
အကြောင်းဖြစ်တဲ့ နားလည်မှု လဲတွာလေးတွေကို ထိပတ်ကိုတွေ့ဆြုံ ခင်းနဲ့ ဖြေရှင်း ကြဖို့ ဆြုိ ကခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋ္ဌာန်းဆက်… ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆတိုာအကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်မကှို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘ၀ တွေ့ကြဆြုံ က ရတာ တွေဟာ တကယ်တော့ ပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ မရေမတွကန်ငို တ်ဲ့ ဘ၀တွေမှာ ပြေးသွား
ကျင်လည်ကြရတဲ့ သတ္တ၀ါတွေအနေနဲ့ မဖြစ်ဖူး တဲ့ ဘ၀ဆုတိာ မရှနိုငပ်ါဘူး။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဖေဖြစ်ချင်
လည်း ဖြစ်ခြဲ့ ကမှာပါ။ အမေဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပါ။ အစ်ကအို စ်မ၊ ညီညမီ၊ ဇနီးမယား လင်ယောကျာ်း စသဖြင့် ဘ၀အစုံစမှုာံ တစ်မျိုးမျိုးတော့ ဖြစ်ခဲ့ကြမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းတရားတွေ ရှခြိဲ့ ကလို့
လည်း ဒီဘ၀မှာ အကျိုးတရား အနေနဲ့ လာဆြုံ ဖစ်ခြဲ့ ကတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာဆုတဲံ့အခါမှာလည်း တစ်ချို့က အကောင်းတွေနဲ့ ဆြုံ ကပေမယ့် တစ်ချို့ မကောင်းတွေနဲ့ ဆြုံ ကရပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပဋ္ဌာန်းဆက်
ကောင်းတဲ့ သူက အကောင်းဆုမှာံ ဖြစ်ပြီး ပဋ္ဌာန်းဆက် မကောင်းတဲသ့ကူမကောင်းဆုံရမယ့် သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လပိုဲဆုဆုံ ဒါဟာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလအို ကြောင်းအကျိုးတွေ ဖြစ်နေကြတာကုပိဲ ဒီခေတ်စကားနဲ့ ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှေိ နကြတာလို့ ဆြုိ ကခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပဋ္ဌာန်းဆက်ကို ဖြတ်နငို မ်…ှဒီဘ၀မှာ တစ်ဦး နဲတ့  စ်ဦး တွေ့ကြဆြုံ ကရတာတွေဟာ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်မှု ပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်က ပြန်ကြည့ရ်င်လည်း ဒီလို ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေ ရှေိနသမျှ ဘ၀မှာ သံသရာရှညမ်ှု
တွေက ရှေိနကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အကြောင်းတရားတွေ ရှေိနသမျှ အကျိုးတရားအနေနဲ့ ဆင်းရဲတွေ လည်း ရှေိနကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကို မဖြတ်နိငုေ်သးသမျှ နောက်ထပ် အဆက်အဆက်
တွေက ထပ်ထပ်ဖြစ်နေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘ၀မှာ ပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းလို့ သူတော်ကောင်းတွေနဲ့
တွေ့သူတွေ ရြှိ ကသလို၊ ပဋ္ဌာန်းဆက် မကောင်းတဲအ့တွက် မကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ကြဆြုံ က ကြုံကြရ သူတွေလည်း ရှေိနကြပေမယ့် ဘယ်လလိုမျိုးတွေနပဲ့ကြုံကြုံ ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကို မဖြတ်နိငုေ်သးရင်တော့
တစ်ခါပြန်ပြီး ဆြုံ ကရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါဆုတဲံ့ အခါမှာတော့ အကောင်းအဆုိး တွေနဲ့ ကြုံမကြုံဆတိုာသေချာပေါက် မပြောနုင်ိပါဘူး။ အကောင်းဆုးံ ကတော့ အသေချာဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒီဘ၀မှာပဲ ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေ ကို ဖြတ်နိငုေ်အာင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုးံ ပါပဲ။
အပေးအယူ… အပေးအယူ သဘောဟာ မှနြ် ကည့သ်လုပိါပဲ။ မှနြ် ကည်တဲ့အခါ ကုယိ့်ပရုံ ပိ် ကုယ်ိပြန်မြင်ရသလို အပေး အယူမှာ လည်း ကုယိေ်ပးတာ ကုယြိ် ပန်ရတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုယိေ်ပးတဲ့အခါ
အကောင်း ပေးရင် ကုယိလ်ည်းအကောင်း ရမှာဖြစ်ပြီး အဆုိး ပေးရင်တော့ အဆိုးပဲ ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုလိတိုာက ဘယ်သမူဆို အပေးအယူသဘောမှာ အပေးကောင်းရင် အရကောင်းမှာဖြစ်ပြီး အပေးဆုိး ရင် အရဆိုးမှာပဲလို့ ဆုလိတိုာပါ။ ဒီတော့ကား ရယူချင်တသဲူ့တွေ အနေနဲ့ ကုယိယ်ချူင်တအဲ့ ရာဟာ အဆုိး လား အကောင်းလားဆုတိာ စဉ်းစားပြီး အကောင်းလုချိင်ရင်တော့ ကုယိက်အရင်စပြီး အကောင်းပေးကြည့ဖ်ို့ တော့ လိုပါတယ်။
ပေးတာဟာယူတာပါပဲ… လူဘ့  ၀မှာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းနဲ့ ဆက်ဆတံအဲ့ ပုငိ်းမှာ အပေးအယူ သဘောက အရမ်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ပေးတယ်ဆတိုာပစ္စည်း ၀တ္ထုကိေုပးမှ ပေးတာမဟုတပ်ါဘူး။ နေ့စဉ် ပြုမူနေထိုင် ပြောဆုေိနကြ
တာ တွေဟာလည်း တကယ်တော့ အပေးအယူ လုပ်ေနကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ဘက်သကူကုယိက့်ို ကောင်းကောင်းမွနမ်နွ် ပြုမူဆက်ဆံ ပြောဆုေိနထုငိ် စေချင်ရင် အရင်ဆုးံ ကုယိက်ယို တ်ငို က်အကောင်း
တွေနဲ့ ဆက်ဆြံ ပဖို့ လိပုါတယ်။ တစ်ဘက်က ကုယိက့်ို ပြုံးပြစေချင်ရင် ကုယိက်ယို တ်ငို က်အရင်ပြုံးပြပေးဖို့ လုပိါတယ်။ သူများက ကုယိက့်ို အကောင်းပြောစေချင်ရင် ကုယိက်အရင် အကောင်းပြောပေးရပါတယ်။
သူများက ကုယိက့်ိုအရုအိသေ အလေးဂရုပြုစေချင်ရင် ကုယိက်ယို တ်ငို က်အရင် တစ်ဘက်သားကို ရုေိသ လေးစားပေးရပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝကျတဲ့ အပေးအယူ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းပေးမှ
အကောင်း ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလမှိုမဟုတဘ်ဲ ကုယိက်လုချိင်တာက အကောင်းဖြစ်ပြီး ကုယိက်ယို တ်ငိုပေးနေတာက အဆုိး တွေ ဆုရိင်တော့ ပေးတဲအ့တိုင်း အဆုိး ပဲ ရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောင်မကျော်ပါစေနဲ…့  ဘောင်ဆတိုာအနားသတ် အကန်စ့  ည်းကမ်း သတ်မတှခ်ျက်ကို ဆုတိာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အထူး သတိပြုရမှာက ဘောင်တွေ ကနားတွေဟာ ပညတ်သတ်မတှခ်ျက်တွေ ဖြစ်တအဲ့ တွက် ဒီဘောင်တွေကို
အာရုထာံးနေရင် အမြင်ကျဉ်းပြီး အကျိုးမကြီး ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ကုယိက့် ယို က်ို ဘောင်ခတ်မထားနဲလ့ို့ ဆုလိာသူတွေ အနေနဲ့ ဘောင်ဆတိုာလွတ်ေမြာက်မကှုို မရသေးသူတွေ အတွက် အထိန်း အကွပ် တစ်ခု
အဖြစ် လုအိပ်တဲ့အရာများ ဖြစ်ပြီး ဒီလိအုပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုကာ ဘောင်တွေကျော် လုပမ်ရိင်တော့ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစြ် ဖာဆုကျိုးတွေပဲ ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆတိုာသတိပြုကြဖို့ လုပိါတယ်။
ဘောင်ကျော်လာပြီဆရို င် အစွန်း ရောက်လာတာ ဖြစ်တအဲ့ တွက် အစွန်း ရောက်တဲ့ အလုပမ်နှသ်မျှ ဘယ်အလုပမ်ှ မကောင်းဘူးဆုတိာ မမေ့ကြဖို့ လုပိါတယ်။
ဒီလသိုာဆုရိင်… တစ်ချို့တွေ့ဖူးပါတယ်။ ငယ်ငယ်တနုး ကလည်း ဟုကိစ္စိ ဒီကစိ္စေ တွကြောင့် အနှစရ်တှိဲ့ ကုသလို တ်ရား
တွေမှာ ကြိုးစားအားထုတမ်ှု မရှခိသဲ့ လို အသက်အရွယ် ကြီးလာပြန်တော့လည်း ကုယိဘ့် ၀အတွက်၊ ကုယိ့် သံသရာအတွက် ကြိုးစားအားထုတရ်မယ့် အရာတွေကို မလုပန်ငိုေ် သးဘဲ ဟုအိတွက်ပရူ၊ ဒီအတွကပ်ရူ၊
ဟုမှိာ ပျော်ရ၊ ဒီမှာ ပျော်ရ၊ ဟုဟိာဖြတ်မရ၊ ဒါဖြတ်မရနဲဘ့ဲအချိန်ေတွကို ကုနလ်နွေ်နကြတာတွေပါ။ အဲဒလီို ဟုသိံယောဇဉ် ဒီသေံယာဇဉ်တွေကြောင့် တကယ်လပုရ်မယ့် ကုသလို အ်ရေးတွေကို မလုပန်ငို ဘ်ဲ မေ့မေ့ လျော့လျော့ နေခဲတ့ာတွေဟာ သေခါနီးကျတော့မှ အားကိုးရာအစစ် မရှလို့ ကုသလို အ်နှစ်တွေ လုပြ် က
မယ် ဆြုိ ပန်တော့ အချိန်တွေနှောင်းပြီး စိတသ်ွားတုငိ်း ကုယိမ်ပါဖြစ်ကာ နောက်ဆုးံ ဘ၀ဟာ အနှစမ်ပါဘဲ
အဆုးံ သတ်သွားကြရတဲ့ အဖြစ်နပဲ့နိဂုးံ ချုပ်သွားခဲရ့ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိအုဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံရအောင် အချိနရ်တှိုန်း လုပန်ငိုေ် နတုန်း လုပလ်ရို့ တာ လုပြ် ကဖို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိမှု မဟုတရ်င်တော့…။
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၉) ကုသလိုေ် ကာင်းမှုမှာ အသက်အရွယမ်ရှိ… ကောင်းမှုကသုလိုအနှစသ်ာရဆုတိာ အသက်အရွယ်နဲ့ မဆုငိဘ်ဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ သဒ္ဓါတရားနဲ့ ရယူလမို ၊ှု ကုယိက့် ယို က်ို ထိန်း သိမ်း ပြုပြင်လမို ၊ှု ကြိုးစားအားထုတမ်ှေုတွနပဲ့ရရှနိငိုေ် အာင် ကြိုးစားရတဲ့
အရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ငယ်တသဲ့ေူ တွလည်း ငယ်တအဲ့ လျောက် ကြိုးစားရယူနငိုြ် ကသလို ကြီးတဲသ့ေူတွ လည်း ကြီးတဲ့အလျောက် ကြိုးစားရယူနငိုြ် ကမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ပေမယ့် အသိရြှိ ပီး ထိန်း သိမ်း ပြုပြင်နငို မ်ယ် ဆိုရင် အနှစရ်တှိဲ့ ဘ၀ဖြစ်နငိုြ် ပီး အသက်ကြီးပေမယ့် အသိမရှိ ကြိုးစားအားထုတမ်လှုည်း
မရှဘိဲ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ေတွ၊ မကောင်းတဲ့ အာရုေံတွမှာ ပျော်ကောင်းတုန်း ၊ မုက်ိကောင်းတုန်း ဆုရိင် တော့ ကြီးပြီးအနှစမ်ရှ၊ိ အနံမ့  ကောင်းတဲ့ ကြက်သနွန်လီို ဘ၀မျိုးပဲ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းညွနသ်နဲူ့ ကျင့်ကြံသူ… မကောင်းတဲ့ အလုပ်ေတွမှာ ပျော်ကောင်းနေ၊ အသက်အရွယ် ရလာပေမယ့် ကုသလို တ်ရားတွေမှာ ကြိုးစား အားထုတဖ်ို့ သတိမရ ဖြစ်နေသူတွေကို အများကြီး ကြုံဖူးနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ အသိပေးစကား၊ တုကိတ်ွန်း စကား ပြောကြားပေးနေပေမယ့် သူတကို့ ယို တ်ငို က်သံဝေဂမရ၊ သူတို့
ကုယိတ်ငို က်ကုသလို တ်ရားတွေအပေါ်မှာ ရယူလစို တိမ်ရှ၊ိ အားထုတလ်စို တိ် မရှဘိဲ ဖြစ်နေကြလေတော့ ဘုန်း ဘုန်း တုလိ့ ည်း ရသမျှလောက်ပဲ ဟောပြောပြုပြင် ပေးနေရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒဘ္ဓာသာမှာက
လမ်းညွှန်ေပးသူနဲ့ လက်တွေ့လုကိန်ာ ကျင့်ကြံသဆူတိုာသူအ့  လုပပ်ဲ သူလပုန်ိုငတ်ာ ဖြစ်လို့ ဘုန်း ဘုန်း တို့ အနေနဲက့  တော့ လမ်းညွန်ေပးရု၊ံ ဟောပြောပေးရုံ၊ တုကိတ်နွ်း ပေးရုေံလာက်ပဲ လုပ်ေပးနုငိမ်ှာ ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျငြ့် ကံမှု အပိုင်း မှာတော့ သူတတို့ စ်ဦး ချင်း အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်း... လူတိငုး လူတငိုး တစ်ခါတစ်လေ ကုယိက်ျင်လည်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသုငိ်း အ၀ိုင်းမှာ ဘယ်လပိုဲ
ပေါင်းသင်းနေထုငိ် ပြုပြင်ပေမယ့် ပြုပြင်လို့ မရသူများ၊ လုကိေ်လျာလို့ မရသူများ၊ အဆင်ပြေအောင်
ဆက်ဆလိုံ့ မရသူများ ရှတိတ်ပါတယ်။ အဲဒသီေူတွကြောင့် ကုယိမ့်ှာ စိတပ်န်းလူပန်း ဖြစ်ကြရပြီး နေ့စဉ်နငှ့် အမျှ သူတကိုို့ အကြောင်းပြုကာ အကုသလို မ်ျားသာ ဖြစ်နေကြတာကို ကြုံဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုထဇုင်တွေရဲ့ သဘာဝအရ အဆင်မပြေ ဖြစ်ကြပြီဆရို င် တဘက်သူ ဘာပဲလပုလ်ပု၊် ဘာပဲပြောပြော အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ သဘောမရှဘိဲ မကောင်းဘက်ကပဲ တွေးနေမိတတ်ပါတယ်။ မကောင်းအမြင်နဲ့ မကောင်းတွေးထင်နေရင် မကောင်းတဲ့ အကုသလို ပ်ဲ ဖြစ်နေကြမှာ ဖြစ်တအဲ့ တွက် မချစ်မနှစသ်က်သ၊ူ
အဆင်မပြေသူများနဲ့ ရှောင်လမွဲ ရ အတူတကွ နေထိုငရ်သူများ အနေနဲ့ နေ့စဉ်နငှအ့် မျှ အကုသလိုဖြစ်ဖပိုဲ့များနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒလီို အခါမျိုးမှာ တဘက်သကိူု ကုယိအ့် လုကျိ၊ ကုယိ့်စတိတ်ငိုး ကျ ဖြစ်စေဖို့
ကြိုးစားမနေဘဲ ကုယိက်ယို တ်ိုင် အကုသလိုမဖြစ်ဘဲ နေနုငိေ်အာင်ပဲ ကြိုးစားသင်ပ့ါတယ်။ အဆင်မပြေသူ၊ မချစ်မနှစသ်က်သ၊ူ ဆုံးမပြုပြင်လို့ မရသူများကို အကုသလိုမဖြစ်အောင် ကြိုးစားရာမှာ အကောင်းဆုံး နည်းကတော့ ဥပေက္ခာပြုလုကြိ် ခင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတနိုဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ မှနသ်မျှ
ဘယ်လို အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုကြိ် ပီး ခံစားမနေဘဲ လျစ်လျူရှုကာ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿကာလို့ နှလုးံ သွင်း နေလုကြိ် ခင်းကသာ ကုသလို မ်ရပေမယ့် အကုသလိုမဖြစ်တဲ့ အမှနက်န်ဆံုး ၊ အကောင်းဆုးံ နည်းတစ်ခပဲု ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ... တကယ်တော့ အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းဟာ အပြစ်အဖြစ် သက်သာတယ်ဆတိုာအသေအချာပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတွေးကြည့်ရင် လူတငိုး လူတိငုး ကုယိစ်အီားနည်းချက်များ ရှတိတ်ကြတဲအ့တွက် အဲဒအီားနည်းချက်ကို ကြညြ့် ပီး ဆက်ဆြံ ကမယ်ဆရို င်တော့ ဆက်ဆေံရး အဆင်ပြေဖို့ မလွယလ်ပှါဘူး။ ပြီးတော့ အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ အကျင့ေ်လးတွေ ရှေိနပြန်တအဲ့ ခါ မကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင်က အရင်ဆံုး
နေရာယူထားတဲ့အတွက် ဘယ်သကူ့ြို ကညြ့် ကည့် မကောင်းတဲအ့ချက်၊ အားနည်းတဲ့ အချက်ကပိုဲတွေ့နေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒလီို အားနည်းချက်နဲ့ မကောင်းတဲအ့ချက်ကို ကြည့မ်ိမယ်ဆရို င်တော့ ကုယိအ့် နေနဲ့ တဘက်သအူပေါ် အကောင်းမြင်ပေးဖို့ မလွယလ်ဘှဲ မကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင်များနဲ့ အကုသလို
အပြစ်များပဲ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အကျင်မ့ရှဘိဲ အဆုိး ကုသိာ ကြည့တ်တ်တဲ့အတွက်ေကြာင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းမြင်တတ်ရင် အပြစ်အဖြစ် သက်သာတဲ့ အတွက် အကောင်းမြင်နငိုအောင် ကြိုးစားသင်ေ့ကြာင်း ဆြုိ ခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကုယိအ့် လုပ်ကယို စ်စ်ပါ… လူတိငုး လူတငိုး ကုယိလ်ပုတ်ဲ့ အလုပ်ေတွ အပေါ်မှာ အပြစ်ဖြစ်မဖြစ် စိစစ်ကြညြ့် ကဖို့ လိပုါတယ်။
ကုယိလ်ပုတ်ဲ့အလုပဟ်ာ ကုယိ့်အတွက်ေရာ သူတပါးအတွကပ်ါ အပြစ်ကင်းတယ်၊ အကျိုးရှတိယ်ဆရို င် ဒီအလုပဟ်ာ ကောင်းတဲ့အလုပြ် ဖစ်ပြီး ကုယိလ်ပုတ်အဲ့ လုပဟ်ာ ကုယိအ့် တွကလ်ည်း အကျိုးမရှ၊ိ သူများ
အတွကလ်ည်း အကျိုးမရှတိဲ့အပြင် လုပသ်မျှ အပြစ်တွေပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆရို င် ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ အလုပပ်ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပတ်စ်ခဟုာ ကောင်းရင် ကုသလိုြ် ဖစ်ပြီး မကောင်းရင် အကုသလိုြ် ဖစ်ပါတယ်။
အကောင်းလုပရ်င် အပြစ်ကင်းပြီး မကောင်းလုပရ်င် အပြစ်တငွ်း ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြစ်မကင်းဘဲ မကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့ အကုသလိုအလုပ်ေတွကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အပြစ်ကင်းကာ
ကောင်းကျိုးဖြာစေမယ့် ကုသလို အ်လုပ်ေတွမှာ တတ်နိငုသ်မျှ ကြိုးစားအားထုတြ် ကဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးကောင်းတာ မဟုတ…်တစ်ချို့က အကုသလိုနဲ့ အကျိုးပေးတယ်၊ လောင်းကစားနဲ့ အကျိုးပေးတယ်လို့ ဆုကိာ အကုသလိုအလုပ၊် မကောင်းတဲ့ အလုပ်ေတွကို ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်ေနတတ်တာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အကျိုးပေးကောင်းတာ မဟုတပ်ါဘူး။ အကျိုးယုတ်ေနစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်တွေ ဖြစ်နေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိနမ်တန်သေးတဲ့အတွက် ဒီအပြစ်တွေကို မခံရသေးပေမယ့် အချိနတ်န်ရင်တော့ ဘုရားလည်း မကယ်နငိုေ် လာက်အောင် အပြစ်နအဲ့ တူ မကောင်းကျိုးကို ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိတာထက် မသိတာခက်… “မရှတိာထက် မသိတာခက်”ဆုတိဲ့ ဆုရိုးစကား တစ်ခရုပှိါတယ်။ ပစ္စည်း ဥစ္စာ မရှတိာထက် အသိဉာဏ် မရှတိာက ပုခိက်တယ်လို့ ဆုလိတိုာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရား ရှုဒေါင်က့ပြောမယ်ဆိရုင် မရှတိာဟာ ဒါနကြောင့် ဖြစ်ပြီး မသိတာဟာ ပညာကြောင်လို့ ပြောနုငိပ်ါတယ်။ ဒါနမပါတော့ မရြှိ ဖစ်နေပြီး ပညာမပါ တော့ မသိဖြစ်နေတတ်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနမပါတဲသ့ေူတွဟာ ဖြစ်လေရာဘ၀တွေမှာ မွဲနေ
တတ်ပြီး ပညာမပါတဲ့ သူတွေကတော့ ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ အသိမရြှိ ဖစ်ကာ မောဟအမှောင် ဖုံးနေတတ် ပါတယ်။ အမှားကို အမှနထ်င်၊ အမှနက်ို အမှားထင်ပြီး စိတထ်င်ရာ လုပ်ေနမိတတ်ပါတယ်။ ပုဆိးု တာက ကုသလို က်ို ကုသလို လ်ို့ မသိ၊ အကုသလို က်ို အကုသလို လ်ို့ မသိတာက ပုဆိုးပါတယ်။
တစ်ခြားအရာတွေမှာ မသိတာထက် ကုသလိုအကုသလို က်ို မသိတာက အဆုိး ဆုံးဖြစ်ပြီး အပြစ်ပြို ကီး ကြောင်း ဗုဒအ္ဓ ဘိဓမ္မာ သဘောအရ လေ့လာ စမ်းစစ်ကြည့်နငို ပ်ါတယ်။
မကောင်းတဲအ့လုပရ့်ဲ သဘော… မကောင်းမှု အကုသလိုရဲ့ သဘောက အဲဒီမကောင်းတဲ့အလုပက်ို လုပပ်ါများလာတဲအ့ခါ မကောင်းမှုကို
မကောင်းမှုလို့ မမြင်တော့ဘဲ သာမန်နေ့စဉ် ထမင်းစား ရေသောက်အလုပတ်စ်ခု အဖြစ် ထင်လာတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကောင်းမှု အကုသလို ဟ်ာ အသေးလေးဆြုိ ပီး အထင်မသေးပါနဲလ့ို့ ဗုဒဘ္ဓ ရုားရှင် မိနေ့် တ်ာမတူာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကုသလို အ်ားလုးံ ရဲ့ တရားခံ… မဟုတတ်ာကို ပြောတတ်တသဲ့ တူစ်ယောက်ဟာ မလုပန်ငို တ်ဲ့ အကုသလို ဆ်တိုာမရှဘိူးလို့ ဆုသိလို
ပါးစပ်က မဟုတတ်ာတွေ ပြောလာတတ်ပြီဆရို င် အဲဒသီဟူာ မကောင်းတဲ့ အလုပက်လို ည်း အလွယတ်ကူ လုပြ် ဖစ်တတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှငက်သားတော် ရာဟုလာကို “ချစ်သား ရာဟုလာ မုသားဆုလျိင် ရယ်ဖယွမ်ျှ ပင် မပြောနဲ”့ လို့ မိနေ့် တ်ာမတူာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နှုတက်မို စောင့်စည်းဘဲ
အလွယတ်ကူ ကျူးလွနတ်တ်တသဲူ့တွေဟာ သူစ့  ကားနဲသ့  ကူ့ြို ပန်ပြီး ထိခကိုေ် စကာ စကားနောက် တရား ပါကုနတ်တ်တအဲ့ တွက် စကားပြောတဲအ့ခါ ကောင်းတဲတ့ရားတွေပါအောင် ပြောဆြုိ ကဖို့ တုကိတ်နွ်း ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လလိုြူ ဖစ်ချင်လ…ဲလူဘ့  ၀ကို ရလာပေမယ့် ရရှလိာတဲ့ လူဘ့  ၀မှာ ကုယိရ့့်ဲ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အတွေးအကြံတွေကြောင့် လူဟာ လူငရဲသားလည်း ဖြစ်သွားနုငိ်၊ လူပြိတ္တာလည်း ဖြစ်သွားနုငိ၊် လူတရိစ္ဆာန်လည်း ဖြစ်သွားနုငိ်၊ လူသား
စင်စစ်လည်း ဖြစ်နေနုငိတ်ဲ့အတွက် ဒီလေူလးမျိုးထဲက ကုယိက်ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်ချင်လဆဲတိုာရွေးချယ် ပြီး ကုယ်ိဖြစ်ကယို ခ်ံရတဲ့ ဘ၀မှာ ကုယိေ်ရွးချယ်ရာ ကုယိစ်ံရမှာဖြစ်လို့ ရွေးချယ်မှု မမှားကြဖို့ ဆုလိုရင်း
ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်မမှုားရင် လူဟာလည်း အဆင်န့မိသ့်ွားတတ်တအဲ့ တွက် အမှန်ေရွးချယ်ပြီး လူပသီတဲ့ အဆင့်မြင်လြူ့ ဖစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တုကိတ်နွ်း လုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အကုသလိုဒုစရုကိ်
များနဲ့ ပျော်မွေ့နေတာတွေကြောင့် လူမပီသတဲလူ့၊ လူတရိစ္ဆာန်၊ လူပြိတ္တာ စတဲ့ လူတွေဘ၀ကို မရောက် စေကြဘဲ ကုယိက်ျင့သ်လီနဲ့ ကုသလို သ်ုစရုက်ိတွေမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ လူပသီတဲ့ လူစင်စစ်များ ဖြစ်အောင် အသိသတိနဲ့ ကြိုးစားအားထုတြ် ကဖို့ အကြံပြုလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စိတအ်ားဖြည့် စကားစုလေးများ (၁၀) ရုပ်ေဖာက်ပြန်တဲ့အခါ… ဗုဒစ္ဓာပေမှာ ရုပတ်ရား ဖောက်ပြန်မဟှုာ ကံ၊ စိတ၊် ဥတု၊ အာဟာရ ဆုတိဲ့ အကြောင်းတရား လေးပါးမှာ တစ်ပါးပါးကြောင့် ဖောက်ပြန်တတ်တယ်လို့ ဆုပိါတယ်။ သတ္တ၀ါတစ်ဦး ချင်း လုပ်ေဆာင်ခတဲ့ အတိတက်ံ ပစ္စုပ္ပနက်ံတွေကြောင့် ရုပတ်ရား ဖောက်ပြန်တတ်သလို စိတ်ေကြာင်လ့ည်း ဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ရာသီဥတုကြောင်လ့ည်း ဖောက်ပြန်တတ်သလု၊ိ အစားအစာတွေကြောင်လ့ည်း ဖောက်ပြန်တတ် ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုယိက့် ယို က်ို ဆင်ခြင်ပြီး စားကြမယ်ဆရို င် ရုပ်ေဖာက်ပြန်မကှုို သိသသိာ ကာကွယန်ိုငပ်ါတယ်။ လူအတော်များများ ရောဂါရပြီး ရုပ်ေဖာက်ပြန်ကြ
တာလည်း ဒီအစားအသောက်တွေကြောင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားမတော်တစ်လပု အသွားမတော် တစ်လမှ်း လို့ ဆိုကြသလို အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာလို့ ဆြုိ ကခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံ၊ စိတ၊် ဥတု၊ အာဟာရဆုတိဲ့ ဒီတရားလေးပါးကို ဉာဏ်နယဲ့ ဥြှ် ပီး ကုယိရ့် ပ်ုနအဲ့ ဆင်ပြေမယ့် အရာတွေကို ရွေးချယ်လကို န်ာ ကျင့သ်ုးံ နေထုငြိ် ကမယ်ဆိရုင် ရုပတ်ရား ဖောက်ပြန်မကှို အလွယတ်ကူ ထိန်း သိမ်း နုငိမ်ှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ေဖာက်ပြန်တအဲ့ ခါ… စိတ်ေဖာက်ပြန်မကှုတော့ သတ္တ၀ါ အသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန စတဲ့
ကိလေသာ တရားတွေကြောင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစတိေ်ဖာက်ပြန်မကှုလို ည်း သမထဘာဝနာ၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ တရားများကို ကြိုးစားအားထုတ်ေပးခြင်းဖြင့် ထိန်း သိမ်း ပြုပြင် ပေးလုရိ့ ပါတယ်။
တရားအားထုတတ်ဲ့ အလုပဟ်ာ ကြိုးစားအားထုတန်ငို ရ်င် အားထုတန်ငို သ်လောက် စိတ်ေဖာက်ပြန်မကှို ပြုပြင်ထနိ်း သိမ်း ပေးနိုငြ် ပီး နောက်ဆံုး ဉာဏ်စဉ်အမြင်ဆ့ုးံ ဖြစ်တဲ့ အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ်အထိ ရောက်ရခှိြဲ့ ပီ
ဆုရိင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်ခြင်း မရှေိတာ့တဲ့ သန္တသိခုကို ရရြှိ ကမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒလီို အဆုးံ ပန်းတုငိအ်ထိ မရောက်နငိုေ် သးပေမယ့် တရားအားထုတြ် ခင်းဖြင့် ဒီဘ၀မှာလည်း စိတ်ေဖာက်ပြန်မှု သက်သာအောင် လုပန်ငို သ်လို သံသရာမှာလည်း ချမ်းသာသုခကို ဖြစ်စေနိုငမ်ှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေသဘောနဲ့ ရွှေမနော… စိတမ်ှာ အညစ်အကြေးတွေ မဖြစ်ဖို့ သမထဘာဝနာ၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ တစ်ခခုကုို ပွားများ အားထုတ်
ကြဖို့ လုပိါတယ်။ တရားအားထုတ်ေနတဲ့ ယောဂီဟာ စိတအ်ညစ်အကြေးတွေကို တုကိဖ်ျက်နေတဲသူ့
ဖြစ်တယ်လို့ ဆုတိဲ့အတုငိ်း ဘယ်သမူဆို မကောင်းမှုမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ကုယိရ့့်ဲ စိတက်ို ဂုဏ်ေတာ်ပွား ခြင်း၊ မေတ္တာပွားခြင်း စတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း တစ်ခခုကုို ပွားများပေးတာတို့ ရုပန်ာမ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အရာတွေ ကို သတိကပ်ပြီး လုကိမ်တှေ်ပးတဲ့ သတိပဋ္ဌာန် ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ေပးတာတို့ လုပ်ေပးခြင်းဖြင့်
ကုယိ့်စတိက်ို သန်ရ့  ငှ်း အောင် ကြိုးစားကြဖို့ လုအိပ်လပှါတယ်။ စိတက်ို သမထ၊ ၀ိပဿနာ ဘာဝနာတွေနဲ့ ထုလွှံမ်း ထားတဲ့ သူဟာ ကိလေသာ အညစ်အကြေးတွေရဲ့ တုကိခ်ကိုမကှုို ကာကွယြ် ပီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက် သန်ရ့ှင်းပြီး ခွနအ်ားပြည်တဲ့ စိတက်ို ပိုငဆ်ငို ထ်ားတဲ့ ရွှေစတိပ်ိုငရ်ငှမ်ျားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အညစ်အကြေး ကင်းတဲ့ ရွှေရဲ့ သဘောဟာ လုသိလို တန်ဆာဆင်နငို သ်လို အညစ်အကြေးကင်းတဲ့ မနောဟာလည်း ကိလေသာကို ပယ်ခွာပြီး လုရိာကို အရယူနငို တ်ဲ့ သဘောရှတိအဲ့ တွက် တရားဘာဝနာ တစ်ခခုကုို အားထုတရ်င်း ရွှေမနောပုင်ိရငှမ်ျား ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ပဲ ရှပိါတော့တယ်။
ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါး… ကောင်းတဲ့အလုပက်ို လုပတ်ဲ့အခါတွေဟာ ကောင်းတဲအ့ခါ၊ ကောင်းတဲရ့က်ကောင်း ရက်မြတ်များ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လုပဖ်လိုို့ကြောင်းနဲ့ မကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်ေနတဲအ့ခါတွေဟာ
ဘယ်လို အချိန၊် ဘယ်လရို က်မျိုးမှာ ရွေးပြီးလုပလ်ပု မကောင်းတဲ့ ပြဿဒါးများပဲ ဖြစ်နေမှာဖြစ်လို့ အချိန် မရွေး၊ နေရာမရွေး မလုပဘ်ဲ နေနုင်ိအောင် ကြိုးစားဖုလိ့ေို ကြာင်း ဆုလိရို င်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမှုကသုလို မ်ှာ ပြဿဒါးဆုတိာ မရှသိလို မကောင်းမှု အကုသလို မ်ှာ လည်း ရက်ရာဇာဆုတိာ မရှတိဲ့ အတွက် ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါးဆုတိာတွေဟာ ကုယိက်ယို တ်ငို ရ်ဲ့ ရွေးချယ်လပုက်ိငုမ်မျှုားသာ ဖြစ်ကြောင်း
သိစေလုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုယိက်အမြဲရက်ရာဇာတွေပဲ ဖြစ်ချင်တယ်ဆရို င် ကောင်းတာတွေကို လုပ်ေနဖို့ လြုိ ပီး ရက်ကောင်းရက်မြတ်တွေ မလိုချင်ဘူး ဆုရိင်တော့ မကောင်းတဲအ့လုပ်ေတွနဲ့ နေလုကိ
နေနုင်ိကြောင်းနဲ့ အရာရာမှာ ကုယိ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မသှုာ အဓိကကျတယ်ဆတိုာသဘောပေါက်စေလုရိင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်မြင်၍ အပြစ်ပြင်ပါ… သေချာတွေးကြည့ရ်င် လောကမှာ ပြည့်စတုဲံ့ သူဆတိုာတစ်ယောက်မှ မရှသိလို၊ အပြစ်မလုပဖ်ူး ၊ မမှားဖူး တဲ့ သူဆတိုာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြစ်ကို မမြင်သေူတွ၊ အပြစ်ကို အပြစ်လို့ သိအောင် ညွနြ် ပ ပေးမယ်သူ့ မရှသိေူတွကတော့ အများကြီး ရှပိါတယ်။ ပြီးတော့ အပြစ်ကို ညွနြ် ပသူတွေ ရှေိပမယ့် အဲဒီ အပြစ်ကို ၀န်ခြံ ပီး နောင်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်နငို တ်ဲ့ သူတွေလည်း ထင်သလောက် မရြှိ ကပြန်ပါဘူး။
ပုဆိးု တာက အပြစ်ကို ပြောဆုဆိုးံ မပေးဖို့ ဖိတြ် ကားပြောဆုနိငို တ်သဲ့ တ္တိ မရှသိေူတွ၊ အပြစ်ကို ပြသ ပြောဆို လာရင် ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ခနုိံငတ်သဲ့ တ္တိ မရှသိေူတွ များနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ကို ပြောပြလာရင် ကျေးဇူးတင်စွာ လက်ခြံ ပီး နောင်မဖြစ်အောင် ကုယိက့် ယို က်ို ထိန်း သိမ်း နေထိုင်၊ ပြုပြင်မယ်ဆတိဲု့ ခံယချူက် မရှလိကို့ တော့ လောကကြီးမှာ သတ္တ၀ါတွေဟာ တစ်ယောက်နတဲ့ စ်ယောက်
ဘယ်တော့မှ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထုငိန်ိုငြ် ကမှာ မဟုတပ်ါဘူး။ အပြစ်ပြသူကလည်း အပြစ်ချဖို့ ကြိုးစားနေ၊ အပြစ်အပြခံရသူကလည်း အပြစ်ကို မခံယဘဲူ ပြန်လနှအ်ပြစ်ပချုံဖို့ ကြိုးစားနေလုကိ့ တော့ ဘုရားရှင် ညွနြ် ပ တဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုငန်ငိုေ် ရးနဲ့ အဝေးကြီးဝေးနေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အမှားများတတ်တဲ့ ပုထဇုဉ်ပဂ္ဂုို လ်တွေအတွက် အပြစ်ကို ပြသပြောဆို ပေးမယ်သူ့ ရှိနေတာ
ကုကိနေတတ်မယ်ဆိရုင် ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေတာပါ။ ယူတတ်မယ်ဆရို င် အပူသက်သာစရာ ဖြစ်နေတာပါ။ မြောက်ပင်ြ့ ပီး ပေါင်းသင်းစားသောက်ကာ အပြစ်တစ်ခခု ဖြစ်လာတဲ့အခါမှ ကုယိအ့် ပေါ်ပုချံပြီး ရှောင်ထကွ် သွားတတ်တဲ့ သူတွေအများကြီး ရှိနေတာထက်စာရင် အမှားကုေိထာက်ကာ အပြစ်ကို ပြသ လမ်းညွှန် ပေးတဲသူ့ တစ်ယောက်နစှေ်ယာက် ရှေိနတာက ပြုိ ပီးဘ၀ကို မြင်စေ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးက
သူတော်ကောင်းကြီးများဆုရိင် အပြစ်ကေို ထာက်ပြ ပြောဆုေိပးတတ်တဲ့ ဆရာများနဲ့ များများတွေ့ဆုံ ရပါလိ၏ုလုေိ့ တာင် တောင်းဆုပြုကြတယ်လို့ ဆုပိါတယ်။ မသိမအှုားကြီးတတ်တဲ့ ပုထဇုဉ်တွေမှာ မသိတာ ကို သိအောင်ပြသပေးတဲသူ့ ရှေိနတာဟာ ဘ၀မှာ ဂုဏယ်စူရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်မပြေ ဖြစ်ကြရာဝယ်… ဒီနေ့ခေတ် လူတော်တော်များများ တစ်ဦးနဲတ့  စ်ဦး အဆင်မပြေမှုများနှင့် ငြင်းခုံခကို ရ်န်ဖြစ်မမျှုား အဖြစ်များ
ကြခြင်းဟာ မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးကြတဲ့ အတွက်ေကြာင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး နဲတ့  စ်ဦး မေတ္တာမရှိကြတဲ့ အခါ ချစ်တာလည်း မရြှိ ကဘဲ သစ္စာပါ မသိကြတဲအ့ထိ ဖြစ်ကနုတ်တ်ပါတယ်။ အတူနေတဲ့ သူအချင်းချင်း အကျိုးလုလိားမှု မေတ္တာ ကင်းလာကြတဲအ့ခါ အဆုိး ကုသိာ ဖြစ်စေတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ဦး တစ်ယောက်အပေါ်မှာ မေတ္တာမရှိ ဖြစ်လာတဲအ့ခါ အဲဒသီဘူယ်လပိဲုကောင်းနေပါစေ အကောင်း မမြင်တတ်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းမမြင်ရင် မကောင်းထင်တတ်ပြီး အစောင်းအမြင်နဲ့
မပေါင်းချင်တဲ့ အထိ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မေတ္တာ တရားမရှတိဲ့ အတွကပ်ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေတ္တာတရား မခေါင်းပါးကြဖို့ ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးအနီး အရေးမကြီးပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ နီးတကျက်ကျက် ဝေးတစ်သက်လို့ မြန်မာစကားပုမှာံ ဆုထိားပေမယ့် လူအတော်များများ တစ်ဦး နှင့်
တစ်ဦး ကြား အဆင်မပြေ ဖြစ်ကြရခြင်းဟာ တကယ်တော့ အနီးမှာ အတူတကွ ရှေိနကြတဲ့ အတွက်ေကြာင့် မဟုတသ်လို အစဉ်ပြေနေကြခြင်းဟာလည်း အဝေးမှာ ရှေိနကြတဲ့ အတွက်ေကြာင့် မဟုတဘ်ဲ တစ်ဦး ချင်းမှာ ရှေိနကြတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရယိစတဲ့ တရားများ အားကြီးလာမှုနဲ့ ငြိမ်း ချမ်းမှုကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးလာမှုများကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာတရား
မရြှိ ကရင် လူအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိငုလ်ာတတ်ပြီး ပြိုင်ဆိငုလ်ာရင် အနုငိရ်လုမိလှုည်း အားကြီးလာတတ်တဲ့ အတွက် သူက့  ယိုန် ပှိ်ကုယိသ့်နူ ပှိ က်ာ ပြိုင်လာခြင်းကြောင့် မညီညတွမ်ကှုို ပုမြို ဖစ်စေတတ်ပါတယ်။
မေတ္တာတရား ထားနုငြိ် ကမယ်ဆရို င်တော့ အချင်းချင်း နှိပစ်က်ခြင်းကင်းကာ ငြိမ်း ချမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေမှာ အမှနပ်ဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဝေးအနီးဟာ အရေးမကြီးဘဲ မေတ္တာတရားသာ အရေးကြီးကြောင်း ဆြုိ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ... အကောင်းမြင်တတ်ရင် အဲဒီအခုက်ိအတန်မ့ှာ အကုသလို အ်ဖြစ် သက်သာမှာ အမှနပ်ဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဘက်က ရှုမြင်တတ်တအဲ့ တွက် ကုယိစ်တ်ိမှာလည်း အရင်ဆံုး ကောင်းတဲစ့တ်ိများ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ အဆုိး မြင်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အရာရာကို အဆုိး ဘက်ကပဲ ကြည့်လေ့
ရှတိတ်တအဲ့ တွက် သူ၏စိတမ်ှာ လည်း အဆုိး များ၊ မကောင်းတဲ့ အတွေးများပဲ လွှမ်း မုိး ထားပြီး သူကယို တ်ငိုပဲ အကုသလိုအပြစ်များ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သဘောရှတိတ်ပါတယ်။ အကောင်းဘက်က ရှုတတ်သကူတော့
အတွေးကောင်း၊ အမြင်ကောင်းများနဲ့ မြင်တတ်ကြည့တ်တ်တအဲ့ တွက် သူသန္တာန်တင်ွမှာ ကောင်းတဲ့
စိတထ်ားများ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမှားကို အမှနြ် ဖစ်အောင် ကြည့တ်တ်တဲ့ သဘောမျိုးမဟုတဘ်ဲ ကုယိက့် ယို က်ို အပြစ်မဖြစ်အောင် သူတပါးရဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကို ရှာကြည့တ်တ်တဲ့ အလေ့အကျင့် မျိုးကို လေ့ကျင့ေ်လ့ရတှိဲ့ သူဟာ အမှနပ်ဲ အကောင်းမြင်တတ်သူ ဖြစ်ပြီး အကုသလိုအဖြစ်နည်းသူ
တစ်ယောက် ဖြစ်နိငုပ်ါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတငိုး လူတငိုး ကောင်းကွက်ေလးများ တစ်ခမုဟုတ် တစ်ခု
ရှေိနတတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒေီကာင်းကွက်ေလးတေကို ရှာပြီး ကုယိက့် ယို က်ို အပြစ်မဖြစ်အောင် ကြည့တ်တ်မြင်တတ်၊ နှလုးံ သွင်း တတ်ဖို့ လုေိကြာင်း တုကိတ်နွ်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းလို့ မ, ခြင်းဖြစ်... မြန်မာစကားပုမှာံ “လူမင်းဘုန်း ကြီးလျှင် နတ်မင်းမနေနိုင်” ဆုတိဲ့ စကားရှသိလို “လူမစွမ်း နတ်မ”ဆုတိဲ့ စကားလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လူမစွမ်းနတ်မဆုတိဲ့ စကားဟာ လူမစွမ်း လုမိ့ ဟုတပ်ါဘူး။
နတ်ကတောင် မ,ပေးရတယ် ဆုကိတည်းက အစွမ်း တစ်ခခု ရှေိနလုပိဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစွမ်း ကတော့ တခြားအစွမ်းမဟုတပ်ါဘူး။ ပုညဆုတိဲ့ ကုသလိုအစွမ်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသလိုအားကြီးရင် လူလည်း
မနေနိုငသ်လို နတ်လည်းမနေနုငိပ်ါဘူး။ ကုသလိုရတှိ သဲ့ ကူို လူလည်းစောင်ရှေ့ာက်သလို နတ်လည်း စောင်ရှေ့ာက်ပါတယ်။ ဒီထက် တစ်ဆင်တ့က်လို့ ပါရမီရတှိဲ့ ကုသလိုများသူ ဖြစ်မယ်ဆရို င်တော့ ဘုရားရှင် များ ကုယိေ်တာင်တငိုကြွရောက်ပြီး ချီးမြှောက်ပေးရပါတယ်။ ဒါဟာ သူကယို တ်ိုင် ပြုလုပခ်တဲ့ ကုသလို
အစုများကြောင်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နတ်မ,တယ်ဆတိုာကုသလို အ်ားကြီးတဲ့ သူများကိုပဲ မ,လေ့ရတှိဲ့ အတွက် နတ်မ,စေချင်ရင် ကုသလိုေ် ကာင်းမှု များများပြုကြပါလို့ ဆြုိ ကခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရားထူဌာနန္တရတွေ မြဲဖို့အတွက် ဗေဒင်၊ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်တွေ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ အကျင့်သီလမြဲဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျင...